एयर प्रदूषण कुकुर ब्लग - कुकुर स्वास्थ्यको बारेमा अधिक जान्नुहोस् - पृष्ठ - - K9 मास्की राम्रो एयर टीम द्वारा
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग
अगस्ट 15, 20197तपाईको प्रिय घरपालुवा जनावरहरुमा वाता प्रदूषण को हानिकारक प्रभाव
अगस्ट 06, 2019 मौसम परिवर्तन क्यालिफोर्नियामा 500०० प्रतिशत ठूलो वन्य फायर उत्पादन गर्दै
जुलाई 01, 2019 वन्य आगोको धुवाँको लागि नयाँ पशु अनुसन्धान
7 तपाईको प्रिय घरपालुवा जनावरहरुमा वाता प्रदूषण को हानिकारक प्रभाव
अगस्ट 15, 2019
के तपाईंको घरपालुवा जनावरहरू विषाक्त हावा प्रदूषणबाट पनि प्रभावित हुन्छन् जसरी मानिसहरूले गर्दछन्? जवाफ "हो" हो। जनावरहरू समान रूपमा वायु प्रदूषणबाट प्रभावित हुन्छन्। हावाको गुणवत्तालाई गिर्नु भनेको हाम्रो प्यारो घरपालुवा जनावरहरूको सँधै छोटा जीवनको लागि दोष हो। जब हामी हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूको ख्याल राख्छौं, के हामी सामान्यतया बेवास्ता गर्छौं त्यसले तिनीहरूमा प्रदूषणको प्रभाव हो।
डिग्रेड गरिएको वायु गुणस्तरको निरन्तर र लामो समय सम्म जोखिमले तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूमा विभिन्न प्रकारका फोक्सो, घाँटी र नाकका रोगहरूलाई जन्म दिन सक्छ, ब्रोन्काइटिस वा दमको रूपमा। यहाँ हामी तपाइँलाई केहि तरिकाहरू प्रस्तुत गर्दछौं जसले हावाको गुणस्तर बिगार्दा हाम्रो प्यारो साथीहरूलाई असर गर्छ र यसको प्रतिरोध गर्न हामी के गर्न सक्छौं।
धुवाँले तपाईंको पाल्तु जनावरको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ
धुँवादार दिनहरू केवल तपाईंको लागि मात्र होईन, तर तपाईंको प्यारो साथीको लागि पनि खराब हो! क्वालिटीका कारण धुँवाले गम्भीर रोगहरू निम्त्याउँछ हावा तिनीहरू सास फेर्न सक्छन्। यसले सास फेर्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जसमा दम घुट्छ। यो हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूको लागि तीव्र र लामो समय सम्म जोखिमको लागि घातक हुन सक्छ।
उपाय: धुम्रपानको चरणहरूमा आफ्ना घरपालुवा जनावरहरूलाई भित्र राख्नुमा यसको कारणले ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ। तपाईका घरपालुवा जनावरहरुलाई एक धुवाँको दिनहरुमा टहल्नको लागि बाहिर नलिन सुझाव दिइन्छ। प्रयोग गर्दै कुकुर हावा प्रदूषण मास्क तपाईको कुकुरलाई छोटो पैदल तान्नको लागि र बाथरूममा जानको लागि यो उपयोगी तरिका हो
निष्क्रिय धुम्रपानले घरपालुवा जनावरलाई असर गर्छ
सिगरेट धूम्रपानबाट निष्क्रिय धुवाँ तपाईंको कुकुर र घरपालुवा जनावरहरूको लागि हवाको गुणस्तरको समस्या हो। भर्खरै गरिएको एउटा अध्ययनले देखायो कि धुम्रपान रहित घरहरूमा घरपालुवा जनावरहरू धुवाँबाट ग्रस्त घरहरूमा बस्ने समकक्षहरू भन्दा स्वस्थ फोक्साहरू हुन्छन्। निष्क्रिय धूम्रपान उनीहरूको फोक्सोको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ किनकि उनीहरू आफ्नो अधिकांश समय भुइँमा खर्च गर्छन्।
उपाय: धूम्रपान तपाईंको स्वास्थ्यको लागि केवल खराब छैन; यसले तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई पनि असर गर्छ। तपाईंको घरहरूमा छुट्टै धुम्रपान क्षेत्र स्थापना गर्नुहोस् जहाँ तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूको पहुँच हुँदैन, वा अझै राम्रो छ, राम्रोको लागि धुम्रपान छोड्नुहोस्!
भित्री गतिविधिहरूले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ!
तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि सफा हुनु ठूलो हो, र वास्तवमै यो छ, तर तथ्य पनि केहि अन्य कारकहरूमा पनि निर्भर गर्दछ। केहि ईन्डोर गतिविधिहरू जस्तै कृत्रिम रासायनिक सफाकर्ता र धुम्रपानद्वारा सफा गर्दा तपाईंको पालतू पशुहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ। यसले क्यार्सिनोजेनहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंको पालतु जानवरहरूमा मेसोथेलियोमा, फोक्सो, मूत्राशय र नाक क्यान्सर जस्ता रोगहरू निम्त्याउन श्रेय दिन सकिन्छ!
उपाय: हरियोमा जाऊ। कृत्रिम कार्सिनजनले भरिएका क्लीन्जरहरू रोक्नुहोस् र थप स्वास्थ्य छनौटहरूको लागि जानुहोस् ताकि तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूमा सबै कार्सिनजन-रहित हावा साँस लिन सकोस्।
बाहिरको प्रदूषणले तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई असर गर्दछ
बाहिर प्रदूषणले तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई पनि असर गर्दछ। एउटा सर्वेक्षणमा यो देखिएको छ कि उच्च प्रदूषण तहको क्षेत्रका कुकुरहरूले तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषण भएका क्षेत्रहरूमा बस्नेहरूको तुलनामा मस्तिष्कको जलन बढाउँछन्। प्रदूषणले तपाईंको पाल्तु जनावरहरूलाई निश्चित अल्जाइमर-जस्तो बिमारीहरू पनि लिन सक्छ।
उपाय: घरपालुवा जनावरहरू हिंड्नको लागि बाहिर निकाल्नु स्पष्ट नै आवश्यक छ, तर दूषित पदार्थहरूले कम प्रदूषित क्षेत्र छनौट गर्न तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ। कि त क्लीनर जोन मा आफ्नो आधार बदल्नुहोस् वा प्रदूषण को प्रभावहरु लाई कम गर्न सडक किनारहरु र उद्योगहरु को टाढा क्षेत्रहरु मा आफ्नो घरपालुवा जनावरहरु लाई बाहिर ले।
कीटनाशक प्रयोग तपाईंको कुकुरको लागि घातक हुन सक्छ
यो अवलोकन गरिएको छ कि व्यक्तिगत खेतहरूमा कृत्रिम कीटनाशक प्रयोग तपाईंको कुकुरलाई घातक साबित गर्न सक्छ। एउटा अध्ययनका अनुसार कृत्रिम कीटनाशक प्रयोग भएको घरमा बस्ने कुकुरहरूको लगभग 30% क्यानाइन घातक लिम्फोमा हो जुन क्यान्सरको एक रूप हो। यो पनि अवलोकन गरिएको छ कि यी कुकुरहरू मध्ये 70% को आसपास वास्तवमा यो घातक रोग लिन को एक संभावना छ।
उपाय: कृत्रिम कीटनाशकहरूले राम्रो भन्दा बढी हानि गर्छन्। मानव र पशुहरूमा यसको गम्भीर स्वास्थ्य प्रभावको साथ, यसलाई स्पष्ट पार्नु उत्तम हो र अधिक पर्यावरण मैत्रीको लागि रोज्नु उत्तम हो। तपाईंको प्यारी मित्र यस्तो अनावश्यक जोखिम कारकको अधीनमा हुनुहुन्न।
इनडोर प्रदूषणले तपाईंको पाल्तु पशुको फोक्सो क्षमता कम गर्दछ
यो फेला परेको छ कि मालिकहरूले घरहरू जो धूम्रपान गर्छन् र आगो जलेको दाउराबाट हावालाई प्रदूषित गर्छन् घरपालुवा जनावरको शरीरलाई हानिकारक छ। त्यस्ता घरहरूमा बिराला र कुकुरहरू अस्थमा र फोक्सोको कार्यक्षमता जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू समात्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
उपाय: एक राम्रो एयर प्यूरिफायर, वा केन्द्रीय तताउने र चिसो प्रणालीहरूको लागि एयर फिल्टरहरू स्थापना गर्नुहोस्, तपाईंको घर भित्र भित्री वायु प्रदूषण सीमित। भित्र नयाँ र शुद्ध हावा, तपाईंको घरपालुवा जनावरहरू स्वस्थ हुनेछन्।
कृत्रिम कोठा fresheners प्रयोग तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई असर गर्दछ
जबकि हामी हाम्रो घरहरू सँधै राम्रो गन्ध लिन चाहन्छौं, यो एक मूल्यको साथ आउँदछ। यदि हामी एरोसोल युक्त कृत्रिम फ्रेसनरहरूको लागि जान्छौं भने, यी दूषित पदार्थहरू तपाईंको पालतु पशुहरूको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैनन् र फलस्वरूप हृदय र फोक्सोका बिमारीहरू हुन्छन्।
उपाय: प्राकृतिक फूलहरू कृत्रिम सुगन्ध भन्दा राम्रो तरिकाले काम गर्दछन्, र तपाईंले तीनिहरूलाई तपाइँको प्यारे मित्रलाई राम्रो स्वास्थ्यको लागि योग्य योग्य विस्तार दिनको लागि छान्नु पर्छ।
मौसम परिवर्तन क्यालिफोर्नियामा 500०० प्रतिशत ठूलो वन्य फायर उत्पादन गर्दै
अगस्ट 06, 2019
गएको वर्ष जुलाईको तातो संध्यामा, एक खेलाडीले एउटा थैलीको गुँडलाई प्लग गर्न एउटा हथौड़ा र स्ट्याक प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। लस एन्जलस टाइम्सका अनुसार हतौडा स्लिप भयो, स्पार्क उड्यो र सुख्खा घाँसको प्याच प्रज्वलित भयो। मिनेट भित्र, ब्रश आगो हड्डी-सुख्खा अवस्थामा पोषित र नियन्त्रण गर्न धेरै ठूलो भयो।
यो चाँडै अर्को ब्लेजको साथ मर्ज भयो र मेन्डोसिनो कम्प्लेक्स फायर भयो जुन क्यालिफोर्नियाको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो जंगल हो। यो झन्डै आधा मिलियन एकड जमिनमा जलायो, ​​वा झन्डै miles२० वर्ग माईल, चार महिना पछि अन्ततः बुझाइनु भन्दा पहिले। यसले एक फायर फाइटरलाई मारे र चार जना घाइते भए। क्यालिफोर्नियालीहरूलाई लाग्न सक्छ उनीहरूले आगोको महामारीको सामना गरिरहेका छन्।
विगतको दशकमा राज्यको १० ठूला वन्य आगोहरू मध्ये आधा र यसको १० सबैभन्दा विनाशकारी आगो मध्येको सातवटा देखिएको छ, जसमा गत वर्षको क्याम्प फायर, राज्यको सबैभन्दा भयानक जंगल आगो हो। पृथ्वीको भविष्य जर्नलमा यस हप्ता प्रकाशित गरिएको एउटा नयाँ अध्ययनले फेला पार्दछ कि राज्यको हो आगो प्रकोप वास्तविक छर यो यो जलवायु परिवर्तन द्वारा संचालित भइरहेको छ।
सन्‌ १ 1972 Since२ देखि क्यालिफोर्नियाको वार्षिक जलेको क्षेत्र पाँच गुणा बढी बढेको छ, जुन यो प्रवृत्ति न्यानो मौसमको लागि प्रस्ट देखिन्छ। यस प्रवृत्तिमा मेन्डोसिनो कम्प्लेक्स फायर जस्ता आगोले प्रभुत्व जमाउँछ — विशाल ब्लेज जुन गर्मीमा सुरु हुन्छ र टिम्बरल्याण्डमा प्राय: खुवाउँछ। विगत decades दशकहरूमा, ग्रीष्म timeतुको ज forest्गलमा पर्ने आगलागी आकारमा करीव 800०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो प्रभाव यति ठूलो छ कि यसले राज्यको जलेको क्षेत्रमा सम्पूर्ण वृद्धि भइरहेको छ।
ग्रीष्म timeतुको ज forest्गलमा पर्ने आगलागीहरू यति धेरै सम्भावना किन हुन्छन्? किनभने मौसम परिवर्तनले पहिले नै उत्तरी क्यालिफोर्नियामा मौसमहरूको पुन: परिभाषा गरिसकेको छ। १ 1970 .० को शुरुदेखि नै उत्तरी क्यालिफोर्नियामा ग्रीष्म तुमा औसत २. degrees डिग्री फरेनहाइट (१.2.5 डिग्री सेल्सियस) बढेको छ। केही डिग्री धेरै जस्तो लाग्न सक्छ, तर तातो जंगल आगो संग घनिष्ठ सम्बन्ध छ। “तापक्रमको प्रत्येक डिग्रीले तापक्रमको अघिल्लो डिग्री भन्दा बढी आगो निम्त्याउँछ। र यो वास्तवमै ठूलो कुरा हो, ”पार्क विलियम्स, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका मौसम वैज्ञानिक र कागजका लेखकले मलाई भने।
वातावरणमा तातो प्रत्येक अतिरिक्त वृद्धि वाष्पीकरण को गति, माटो सुक्खा, र रूखहरू र वनस्पति पार्छ, तिनीहरूलाई एक दाउरा को लागी तयार ईन्धन मा परिणत। त्यस कारणका लागि, विलियम्सले भने, तातो ग्रीष्म Northernतुमा उत्तरी क्यालिफोर्नियामा केहि पनि हुन्छ। भिजेको वर्षको समयमा पनि, तीव्र तापको छालले ज .्गललाई निसाल्न सक्छ ताकि यो वर्षा जस्तो कहिल्यै परेन।
र यसले महत्व पुर्‍याउँछ कि गर्मीले जंगलको आगोमा यस percent०० प्रतिशत विस्फोटलाई उक्साइरहेको छ - किनभने जलवायु परिवर्तनको वातावरणसँग गडबडी हुने धेरै तरिकाहरूका बीचमा अतिरिक्त तातो सबैभन्दा साधारण र स्पष्टसँग देखिएको छ। विलियम्सले भने, "गर्मी नै मानवले निम्त्याउने जलवायु परिवर्तनको सब भन्दा स्पष्ट परिणाम हो।" अर्को शब्दहरुमा, मौसम मोडेलहरु भन्छ कि उत्तरी क्यालिफोर्नियाली ग्रीष्म hotतु तातो हुनु पर्छ मौसम परिवर्तन पकड को रूप मा लिन्छ। र डाटाले यही देखाउँदछ — र वास्तवमा के हो जुन ज fire्गलमा आगोको अभूतपूर्व प्रकोप चलाउँदैछ। तर हावापानीले भरिएको आगलागी यस ज summer्गलमा ग्रीष्म timeतुको आगोमा सीमित छ। यो अन्य प्रकारको वातावरण वा वर्षको अन्य समयमा विस्तार हुँदैन, कागज सतर्कता।
विलियम्स र तिनका सहकर्मीहरूले पाए कि जलाइएको गैर-वन क्षेत्र, जस्तै दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको झाडी र घाँसे मैदान जस्ता संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छैन। र शरद wildतुका वन्य आगोहरू जस्तै घातक क्याम्प फायरले यस समाचारलाई प्रभाव पारेका छन र त्यहाँ केही प्रमाणहरू छन् कि उनीहरू ठूलो हुँदै गइरहेका छन् - यद्यपि कुनै पनि तथ्या .्क महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नको लागि पर्याप्त तथ्या .्क छैन।
तर मौसम मोडेलहरूले सुझाव दिन्छ कि क्यालिफोर्नियाभरि शरद fireतुमा आगो बढ्ने नै छ किनकि मौसम परिवर्तनले राज्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। "२० बर्षमा यसलाई फेरि हेर्नुहोस्, र हामी लगभग निश्चित रूपमा भन्नेछौं, 'हो, गिरावटको आगोले तिनीहरूमा ग्लोबल-वार्मिंग फिंगरप्रिन्ट छ।' तर अहिले हामी अझै पनि प्राकृतिक परिवर्तनशीलता को दायरा बाट उभिरहेका छौं, "विलियम्सले भने। चिकोको क्यालिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालयमा भूगोलका प्राध्यापक डन हान्किन्सले मलाई कागजको नतिजामा सहमत हुनु अघि थप डाटा हेर्न चाहेको कुरा बताए।
र उनले भने कि ल्याण्डस्केपमा केही ठूलो मात्रामा परिवर्तनहरू, जस्तै आदिवासीहरूले मौसमी जलेको निलम्बन-द्वारा आगलागी बढाउन सक्छ। विलियम्स सहमत भए कि मौसम परिवर्तन राज्यमा बढेको आगलागीका चालक मात्र होइन। बितेको शताब्दीमा, अमेरिकीहरू आगोलाई दबाउनमा अझ राम्रो भएका छन्, जसको मतलब हो कि सजीलै जलाउन सकिने ईन्धनहरू राज्यको वनमा जम्मा हुन सक्छ। तर उनले भने कि यदि त्यस अत्यधिक ईन्धनबाट आगो बल्छ भने पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरू यस अध्ययनमा यस अवधिमा धेरै स्पष्ट भएका छन्।
त्यो किनभने अधिक ताप र अतिरिक्त आगो बीच मौलिक सम्बन्ध अध्ययन को डाटा मा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन; सहसंबंध "पछिल्लो २० बर्षसम्म यत्तिकै बलियो छ," उनले भने। यसले सुझाव दिन्छ कि पाँच दशकहरूमा ज the्गलहरू उस्तै रहिरहेछन्। केवल हावाको तापमान परिवर्तन भएको छ। त्यहाँ एक दिन हुन सक्छ जब ज change्गल परिवर्तन हुन्छ। विलियम्सले भर्खरै आफ्ना केही विद्यार्थीहरूलाई राज्यको जsts्गलको बाँच्ने अवस्थालाई शताब्दीको अन्ततिर सबैभन्दा खराब अवस्थाको कार्बन-प्रदूषण परिदृश्यमा नक्कल गर्न आग्रह गरे।
तिनीहरूले यो गर्न सकेनन्। "यो सामान्यतया असम्भव छ," उनले भने। राज्य यति तातो हुन्छ कि "२०2070० को दशकमा, तपाईसँग व्यक्तिगत बर्ष छ जहाँ क्यालिफोर्नियाको सबै ज area्गल क्षेत्रको आधा भाग आधा जलिरहेको छ।" तर त्यो हुन सकेन: त्यसबेलासम्म त्यहाँ अझ जंगल बाँकी रहनेछैन। जलाउनु आगोले क्यालिफोर्नियाका सबै जंगलहरू मेटाउने काम सकिसक्यो। एक पटकको शक्तिशाली क्यालिफोर्नियाको ज्गलले स्क्रब, घाँसे मैदान र मरुभूमिको प्रकारको इकोसिस्टममा जान सक्छ जुन ज a्गलको आगोबाट तुरुन्तै रिवाउन्ड हुन सक्छ, वा त्यो कहिल्यै कहिल्यै बल्दैन। विलियम्सले भने, यो क्यालिफोर्नियाका सबै टिम्बरल्याण्डहरू हराउनेछन् भन्ने पूर्वानुमान होइन। यो कसरी निर्भर गर्दछ हामी कसरी कार्बन प्रदूषणलाई कम गर्दछौं अहिले र आउँदो वर्षहरूमा। राज्यको वनको भविष्य, यो हामीमा निर्भर छ।
वन्य आगोको धुवाँको लागि नयाँ पशु अनुसन्धान
गत नोभेम्बरमा क्यालिफोर्नियाको सबैभन्दा घातक जंगलमा आगो लागेको धुवाँले आकाशलाई धमिल्यायो किनकि हवा संसारको सबैभन्दा प्रदूषित हो। क्याम्प फायर लामो समयदेखि बुझाइएको छ, तर धुम्रपानको सानो पार्टिकुलेट पदार्थबाट हुने स्वास्थ्य प्रभावहरू, फोक्सोमा प्रवेश गर्ने र अन्तत: रक्तप्रवाहमा प्रवेश गर्ने असर वर्षौंसम्म रहिरहन्छ। कसैले पनि अचम्मित हुँदैन जब धुम्रपानले दम वा अन्य सासको समस्याहरूको लागि आपतकालीन कोठाको भ्रमणको वृद्धि गर्दछ।
बालबालिकामा न्यूनताका लागि अन्वेषक
अधिक कपटी रूपमा, 2.5 माइक्रोन भन्दा कम नाप्ने, वा धुलो वा परागकणको कणको पाँचौं साइजमा मानिसहरूले हानिकारक ठीक कणहरू पनि भित्रिरहेका छन्। धुम्रपान नहुने ठाउँबाट भित्र पस्दा वा त्यस्ता हावाको फोक्सो कत्तिको हानिकारक हुन सक्छ भनेर अनुसन्धानकर्ताहरूले ती सानो कणहरूलाई जोड्न निकै गाह्रो भएको थियो।
तर भर्खरको कार्यले सुझाव दिन्छ कि बच्चाहरू र शिशुहरू विशेष गरी दिगो-स्थायी स्वास्थ्य प्रभावहरूको लागि जोखिममा छन्। एउटा नयाँ अध्ययनले त्यो सानो कण पदार्थको उच्च स्तरको जोखिममा फेला पारे, PM2.5 को संक्षिप्त रूपमा, बच्चाहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बिगार्छ।
स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले एक्सएनयूएमएक्सको फ्रेस्नोमा फ्याँकिएको जंगली आगोको धुवाँमा परेको एक्सएनयूएमएक्स बच्चाहरूको रगतको परीक्षण गरे र रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंश टी कोशिकाको विकास र कार्यमा संलग्न जीनमा परिवर्तन फेला पारे। परिवर्तनले जीनलाई टी नियामक कोषहरू उत्पादन गर्न कम सक्षम बनायो, सम्भाव्य रूपमा बच्चाहरूलाई एलर्जी वा संक्रमणको बढी जोखिममा राख्छ। “टी नियामक कोषहरूले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीमा शान्ति सेनाको रूपमा काम गर्दछ र सबै चीजलाई अझ उल्टो राख्छ,” मेरी एलुनिक अनुसन्धानकर्ता र प्रमुख लेखक मेरी प्रुनिकी भन्छिन्। "तपाईंसँग यी थोरै, स्वस्थ प्रतिरोधक कोशाहरूहरू छन् जब तपाईं धेरै वायु प्रदूषणको प्रभावमा पर्नुहुन्छ।"
धुवाँ उजागर गरिएको फ्रेस्नो बच्चाहरूको पनि उल्लेखनीय थोरै थक्सएनयूएमएक्स कक्षहरू थियो, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाको अर्को घटक, अप्रभावित बच्चाहरूसँग तुलना गर्दा। नियन्त्रित आगोले अण्डरब्रश खाली गर्नका लागि निर्धारित बर्नको रूपमा चिनिन्छ, यसले स्वास्थ्य असर पनि गर्न सक्छ। अध्ययनमा देखाए अनुसार burn२ जना बालबालिकाले दाउराको चुरोटबाट ल्याएको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि परिवर्तन भएको थियो, तर यो प्रभाव जत्तिकै प्रभावकारी थिएन किनकि यो ज wild्गल आगोको धुँवामा परेका बच्चाहरूको लागि थियो।
अनुसन्धानले ती बच्चाहरूलाई पछ्याएन कि उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीले खराब स्वास्थ्य नतिजा निम्त्याएको हो कि भनेर देख्न सकेन, तर क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेभिसमा चलिरहेको अध्ययनले यस्तै चिन्ताहरू खडा गर्दछ।
वन्य अग्नि धुँवा अन्तर्वासनाको लागि पशु अनुसन्धान
यो एक क्यारेफियाली नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेन्टरको बाहिरी घेरामा बस्ने रेसस मकाकमा केन्द्रित थियो। रीसस बाँदरहरूले वसन्त birthतुमा जन्माउँदछन्, त्यसैले जब 2008 को जुन र जुलाईमा केन्द्रमा जfire्गल आगोको धुवाँ उड्यो, बच्चा बाँदरहरू 10 दिनको PM2.5 मा पर्दाफास भयो जुन 24- घण्टा भन्दा बढी भयो वातावरणीय संरक्षण एजेन्सी द्वारा सेट गरिएको वायु गुणस्तर मानक।
तीन वर्षको उमेरमा (किशोरीहरू, बाँदरको स्तर अनुसार), अन्वेषकहरूले एक्सएनयूएमएक्स बाँदरहरूको परीक्षण गरे जुन आगोको धुँवामा पर्दाफास भएको थियो। उनीहरूले प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रोटिनको कम उत्पादन गरे (इन्टरल्युकिन 50 वा 6), बच्चाको रूपमा धुम्रपानमा नपारिएका बाँदरहरूको तुलनामा। त्यो प्रोटीनले रोगजनकहरूसँग लड्नको लागि सूजन लिन्छ।
यी किशोर बाँदरहरूको सबसेटको जीनको नजिकको अध्ययनले प्रतिरक्षा सम्बन्धी आनुवंशिक परिवर्तन पनि पत्ता लगायो। “स्पष्टतया, वायु प्रदूषणमा भएका विषाक्त पदार्थहरूले प्रतिरक्षा कोषहरूको डीएनएमा स्थायी असर पारिरहेको छ,” लिसा ए मिलर, प्राचार्य अन्वेषक र पशु चिकित्सा चिकित्सा स्कूलको एक प्रतिरक्षा विज्ञ भन्छन्। "यो परिवर्तन हो जुन उसको सम्पूर्ण जीवनको लागि सेलसँग रहन्छ।"
प्रतिक्रियाहरू युवाहरूको लागि विशिष्ट देखिन्छन्: मिलर र उनको टोलीले वयस्कहरूको रूपमा धूम्रपानमा पर्दा बाँदरहरूका बीचमा महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा परिवर्तनहरू देखेनन्। यद्यपि बदलिएको प्रतिरक्षा प्रणालीले बाँदरहरूलाई बढी संक्रमण हुन सकेको छैन, तर धुम्रपानबाट बाहिरिएका सबै बाँदरहरूले फोक्सोको संरचनामा "धेरै गहन परिवर्तन" गरेको छ र फोक्सोको कार्य घटाएको छ, मिलर भन्छन्।
अब लगभग 10 वर्ष पुरानो, बाँदरहरूले अझै पनि उही प्रतिरक्षा परिवर्तनहरू देखाउँदछ। धुवाँ उजागर महिलाहरु लाई पनि तीहरु लाई आफ्नो सन्तानहरु मा परिवर्तन भयो। बाँदर अनुसन्धान व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण योग्य हुँदैन। सुरुवातीहरूको लागि, बाँदरहरू बाहिर घरमै बस्छन्, त्यसैले तिनीहरू धुवाँ सास फेर्छन् सम्म यो हावामा रहिरहन्छ। तर सँगै लिएको, दुई अध्ययनले सानो कण पदार्थ मात्र फोक्सो असर गर्दैन भन्ने सुझाव दिन्छ। “यसले रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा ज wild्गल आगोको धुवाँका प्रभावहरूको अनुसन्धानको दिशामा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई औंल्याउँछ। यो विचार गर्न महत्त्वपूर्ण मार्ग हो, ”कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालयका कलेन रीड भन्छिन्, जहाँ उनले जंगलमा आगोको धुँवाले पारेको स्वास्थ्य प्रभावबारे अनुसन्धान गर्छिन्। उनी अध्ययनमा संलग्न थिइनन्।
ग्लोबल मौसम परिवर्तन का स्वास्थ्य जोखिम
विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको रूपमा ईन्धन ठूलो र अधिक गम्भीर वन्य आगोको रूपमा, सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै जान्छ। 2008 मा, बाँदरहरू 2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मिटर हवाको अधिकतम PM78 स्तरमा पर्दाफास गरियो; नोभेम्बर 16, 2018 मा कि हवा गुणवत्ता मापन शहर Sacramento मा 427 मा हिट। "पश्चिमका धेरै शहरहरूले 2017 र 2018 मा आफ्नो उच्च स्तरको कण स्तर देख्यो," वाशिंगटन-बोथेल विश्वविद्यालयका वातावरणीय रसायनविद् डान जाफ भन्छन्। उनी र तिनका सहकर्मीहरूले यो महिनाको सुरूमा प्रकाशित पेपरमा ठूलो शहरी प्रभाव रिपोर्ट गरे।
"10 मिलियन भन्दा बढी व्यक्तिहरू हवाको गुणस्तर माथिको PM2.5 को स्तरमा पर्दाफास भएका थिए।" राष्ट्रिय इन्टर्जेन्सी फायर सेन्टर उत्तरी क्यालिफोर्नियाको लागि यो गर्मीमा गर्मीमा आगो लाग्ने सम्भावितताको लागि "माथिबाटको" सम्भाव्यताको भविष्यवाणी गर्दछ। जब मानिसहरूले ज wild्गलको आगोले तिनीहरूको क्षेत्र कम्बल गर्‍यो भने उनीहरूले उनीहरूको जोखिमलाई सीमित राख्न सावधानी अपनाउन सक्छन्। केही शहरहरूले तूफानको समयमा प्रयोग हुने खाली ठाउँहरू शेल्टरको जंगलको आगोको संस्करणको रूपमा "स्पष्ट एयर सेन्टरहरू" प्रदान गर्दछन्। उत्तम रणनीति, अवश्य पनि, वन्य आगोको रोक्न वा सीमित गर्नु हो। यसै बीचमा, मानव स्वास्थ्यमा उनीहरूको टोलको अर्थ बुझ्ने काम एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भएको छ।
कुक प्रदूषण एयर फिल्टर मास्क भिडियोहरू
हामीले संग्रह स .्कलन गरेका छौं कुकुर प्रदूषण मास्कको बारेमा भिडियोहरू। ठूला विश्व शहरहरूको शहरीकरण र जलवायु परिवर्तन घटनाहरू जनसंख्या भएको इलाकामा घट्ने क्रममा मानिसहरूमा घरपालुवा जनावरहरूलाई विषाक्त वायु प्रदूषणबाट जोगाउने मांग बढ्दो छ।
यहाँ कुकुर मालिकहरू, कुकुर प्रदूषण मास्क कम्पनीहरु, र पशु चिकित्सकहरु कुकुरहरुका लागि एयर मास्क फिल्टरको बारेमा कुरा गर्ने बारेमा धेरै भिडियोहरू छन्।
के हावा प्रदूषण मास्कहरू कुकुरहरूका लागि छन् - नक्कली समाचारहरूको तथ्य?
कुकुरहरूका लागि दक्षिण कोरियाली प्रदूषण समस्या
K9 मास्क - विश्वको पहिलो कुकुर प्रदूषण मास्क
क्यालिफोर्निया पशु चिकित्सक कुकुर एयर फिल्टर समाचार भिडियो
वायु प्रदूषणको लागि थप कुकुर एयर फिल्टर मोजल मास्कहरू ...
यदि तपाईं कुकुरले लगाएको वायु प्रदूषण मास्कको बारेमा कुनै अन्य भिडियोहरू देख्नुहुन्छ वा जान्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामीलाई बताउनुहोस् जसले गर्दा हामी यहाँ भिडियोहरूको सूची अपडेट गर्न सक्छौं।
वायु प्रदूषण र घरेलु पशुहरू: कुकुरहरू, बिरालाहरू र घोडाहरू
11 सक्छ, 2019
करिब १२,००० वर्ष अघि टर्की र उर्वर अर्धचन्द्राकारका अन्य भागहरूमा शुरू भएको नियोलिथिक क्रान्तिले मानिसलाई आसीन जीवनशैली अपनाउन बाध्य तुल्यायो, जसले गर्दा पाल्तु पशुहरूको घरबारको प्रक्रियामा तीब्र गति आए। यो क्रान्ति अघि कुकुर पहिले नै पालेको थियो र शिकारमा मद्दतको रूपमा मानिसको सेवा गरेको थियो। शिकारको क्रममा, मान्छेले पत्ता लगाए कि सिकार गरिएको प्रजातिहरूको केही सजीलै तालिम पाउन सकिन्छ, यसैले पछि अरू प्रजातिहरू जस्तै कुखुरा, बतख, हंस, भेडा, बाख्रा, गाई, सुँगुर र ऊँट पाले। । यसले यी पशुहरूको लागि आफ्ना मालिकहरूसँग नजिकको जीवनलाई असर गर्‍यो, धेरै जसो स्टालमा वा कोरलहरूमा। पुरानो फार्मका प्रकारहरूमा, मानिस र जनावरहरूले समान हवाई क्षेत्र साझा गर्थे, विशेष गरी जाडोमा। वैकल्पिक रूपमा, कुनै कुनै क्षेत्रहरूमा गोठालाहरूद्वारा निर्देशित बथानहरूका पशुहरूलाई अझै सापेक्षिक स्वतन्त्रताका निम्ति खेतमा जान अनुमति दिइन्थ्यो, तर तिनीहरूमध्ये केही वर्षको लागि मात्र।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, घोडालाई मध्यपूर्वका आसीन व्यक्तिहरूले वा भूमध्यसागर सी वरपरका मानिसहरूले पालेका थिएनन्, तर युरेसियन पहाडका घुमन्ते मानिसहरूबाट आएका थिए। काजाकिस्तानमा हालसालका उत्खननहरूले देखाए कि horses ago०० वर्ष अघि बोटाइका मानिसहरूले घोडा चढेका थिए (आउटराम एट अल।, २००।)। लगभग १००० देखि १ 1000०० ईसा पूर्व घोडा त्यसपछि नजिकै, मध्य र सुदूर पूर्वमा प्रवेश गर्दछ, मुख्य रूपमा एक युद्ध जनावरको रूपमा। ती दिनहरूमा, घोडा पहिले नै एक महँगो जनावर थियो जसको राम्रोसँग देखभाल गर्नुपर्‍यो र त्यसकारण अस्तबलमा राखिएको थियो। यी मध्ये केही वास्तवमै ठूला थिए, उदाहरणका लागि एक फारो रम्सेस द्वितीयले ira1500०० वर्ष पहिले पिरमेसेमा 460० घोडाहरूको लागि बनाएको थियो। जेनोफनका अनुसार घोडा सँधै स्थिर हुनुपर्थ्यो। हालको ज्ञानको साथ यो पशु चिकित्सा दृष्टिकोणबाट साँच्चिकै स्मार्ट थिएन।
घोडाको तुलनामा, बिरालो र कुकुरले मानिससँग धेरै भन्दा धेरै भित्री वातावरण बाँड्न, जसद्वारा यी प्रजातिहरू मानिस जस्तो हानिकारक घटनाहरूमा बढी बढी उदासीन हुन्छन्। स्वाइन, कुखुरा र कम विस्तार जनावरहरू प्राकृतिक, मानव निर्मित र स्वयं निर्मित वायु प्रदूषणको प्रभावमा पर्दछन्। यसबाहेक, तिनीहरू दिनको एक भागको लागि आफ्नो हेरचाह गर्नेहरूसँग उनीहरूको वातावरण साझेदारी गर्न सक्दछन्। त्यसकारण, मानिससँग नजिकै बस्ने जनावरहरूको रोगहरूको अध्ययन, वा उही कोठाहरू साझा गर्दा, मानव स्वास्थ्यको लागि राम्रोसँग जोखिम कारकहरू र कमजोर वायु गुणस्तरको कारणले हुने पैथोफिजियोलजीको लागि सुराग ल्याउन सक्छ।
जनावरहरूमा सामान्य पक्ष हावा प्रदूषण
यो मान्नुपर्दछ कि पृथ्वीको इतिहासमा वायुमण्डलको रचना सधैं प्रत्येक पलमा आदर्श हुँदैन, तैपनि जीवनको विकास भएको छ जुन हामीलाई थाहा छ आज। पृथ्वीको विकासको क्रममा धेरै ठूलो वातावरणीय प्रकोपहरू भयो र असंख्य जीवनहरू हराइदिए। ती केही प्रजातिहरू जो बाँचे, नयाँ प्रजातिहरू विकास भएको छ। महान क्रेटासियस-टर्टियरी लोप भएको करिब १० करोड वर्ष पछि, डायनासोरको युग अचानक समाप्त भएको थियो, स्तनपायी प्राणीहरू पछि घटनास्थलमा प्रवेश गरे र यति सफल भए कि उनीहरूले इओसिनको जीवन रूपहरूमाथि प्रभुत्व जमाए जुन करिब 10 55-40० मिलियन वर्ष अघि रहेको थियो। । आधुनिक स्तनपायी जन्तुहरूको विकासमा, पशु चिकित्सा दृष्टिकोणबाट पनि मानिस भनिने उप-उत्पाद सिर्जना गरियो। यो प्रजाति एक सापेक्ष छोटो समय भित्र व्यवस्थापन ती गतिविधिहरु को उप-उत्पादनहरु द्वारा वातावरण विघ्न को लागी जो सांस्कृतिक विकास भनिन्छ।
यो बढ्दो विश्व जनसंख्या थियो जसले सघन पशुधन उत्पादन अभ्यासहरू गरायो। मासु, अण्डा र दुधको विशाल उत्पादनको काउन्टर ट्रेडको परिणामस्वरूप विश्वभरि ठूलो संख्यामा फोहोरको उत्पादन, संचय र फोहोर भयो। सूक्ष्मजीव रोगजनक, एन्डोटॉक्सिन, गन्ध र धुलो कणको एयरोसोलाइजेशन जनावरबाट उत्पन्न खाद्य उत्पादन श्रृंखलाको अपशिष्ट सामग्रीको उत्पादन र ह्यान्डलिंगको अपरिहार्य परिणाम हो। बाहिरी वातावरणीय वायु प्रदूषणको प्रभाव पछि, ठूला सुविधाहरूमा राखिएका जनावरहरू पर्दाफास हुन्छन् र आफैंले निर्मित भित्री वायु प्रदूषणका कारण प्रायः बिरामी हुन्छन्।
घरेलु जनावरहरूमा नराम्रो हावाको गुणस्तरको असर मुख्यतया घरको वातावरण र घर-बाहिरको हावा प्रदूषणले गर्दा हुने स्वास्थ्य क्षतिमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रदूषकहरूले इनहेलेसन वा इन्जेसन द्वारा प्रणाली प्रवेश गर्न सक्दछन्। वायु प्रदूषणमा, प्राय: जसो इनसेलेसनले स्वास्थ्य समस्याहरू ट्रिगर गर्दछ, तर कहिलेकाँही चराउने जमिनमा औद्योगिक निकासबाट कणहरू जमा गर्नुले स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ। अन्तत: यसले मासु, दुध वा अण्डाहरूमा विषाक्त अवशेषहरू हुन सक्छ र यी क्लिनिकल लक्षणहरू बिना जनावरहरूले यी उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछ। दुग्ध गाईको दुधमा उच्च डाइअक्सिनको समस्या वा बढ्दो फोलोमा जस्ता-प्रेरित गठियाको समस्या नजिकका औद्योगिक गतिविधिहरूबाट धुवाँ जम्मा गरेर चराउने घाँस संक्रमणको उदाहरण हो।
कुकुर, बिराला र घोडालाई हावा प्रदूषणको बारेमा उनिहरुका स्वामीले उस्तै स्वास्थ्य खतरामा पार्दछ। रेनिरो एट अल।, (२००।)) फ्लिनल दमको तुलनात्मक पक्षहरूको समीक्षा गर्‍यो र प्रमाणहरू ल्याए कि साँसको एलर्जीनको लागि मानव र बिखारिएको प्रतिक्रियाको बीचमा महत्त्वपूर्ण समानताहरू अवस्थित छन्। वातावरणीय एरोएल्लेर्जेन्सको भूमिका, तथापि, केहि अध्ययनहरूमा देखाइएको थियो, तर प्रमाणले संकेत गर्दछ कि केही वातावरणीय एलर्जीनहरूले बिराला र मानव दुबैमा रोग निम्त्याउन सक्छ। रानीभण्ड र ओट्टो (२०० 2008)) उनीहरूको एपिडेमिलोजी अध्ययनले देखायो कि पछिल्ला २० बर्षमा ठूलो शहरी शहरमा बिरालाहरूमा दमको प्रकोप बढेको छ। यो मानिसमा पनि भएको देखिन्छ।
इनडोर वायु प्रदूषणको जीवमा सम्भावित हानिकारक प्रभाव पत्ता लगाउन जनावरहरूले अनैच्छिक रूपमा सेन्टिनलको रूपमा काम गरिरहेका हुन सक्छन्। तुलनात्मक रोगविज्ञानको दायराबाट, प्रतिकूल वातावरणीय कारकहरूसँग सम्बन्धित घरेलु जनावरहरूको रोगहरूले वायु प्रदूषणको कारण मानिसका स्वास्थ्य बिरामीहरूको पाथोफिजियोलजीलाई संकेत दिन सक्छ।
पशुहरूमा वायु प्रदूषणको प्रभावहरू
सुंगुर, कुखुरा, गाईवस्तु, बाख्रा र धेरै कम विस्तार भेंडाहरू इनडोर सुविधाहरूमा राखिन्छन् तिनीहरूको जीवनको एक चर भागको लागि, प्राय: तिनीहरूको जीवनको प्रायः। दुग्ध गाई, बाख्रा र भेडाहरूको लागि यी सुविधाहरू एकदम खुला छन् र वायु गुणस्तर बाह्य हवाको गुणस्तरसँग तुलना गर्न योग्य डिग्रीमा छ। यस वायुको गुणस्तर अझै स्वाइन र कुखुराको लागि बन्द सुविधा भन्दा अझ राम्रो छ (Wathes et al।, १ 1998 XNUMX)। यी भवनहरू बरु बन्द छन् र प्राकृतिक वा मेकानिकल रूपमा वेंटिलेसन साना एयर इनलेट्स र आउटलेटहरू मार्फत हो। भित्री तापक्रमलाई इष्टतम बढ्दो अवस्था सिर्जना गर्न विनियमित गरिन्छ, जसबाट भेन्टिलेसन मार्फत तातो हानि एक स्तरमा राखिन्छ जुन शरीरको हिसाबले अझै पनि सहन योग्य छ। सम्भव भएसम्म यी प्रकारका भवनहरू बन्द गर्नुका अन्य कारणहरू कडा जैव सुरक्षा प्रक्रियाहरू हुन् जसबाट हवा वा फोमाइटहरू मार्फत सम्भावित संक्रामक सामग्रीको पहिचानबाट बच्न वा कम गर्न सकिन्छ। इष्टतम विकासको लागि सुविधाहरूमा तापक्रम धेरै उच्च हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, एक दिन पुराना ब्रोलर चकहरु कोठा को तापमान मा राखिएको छ 34 डिग्री सेल्सियस उठेको अवधि को पहिलो दिनहरु। त्यसपछि, वातावरणीय तापमान १ डिग्री सेल्सियस द्वारा दैनिक कम गरिनेछ। उच्च तापक्रमले विशेष गरी मद्यपान गर्नेहरूको वरिपरि फ fun्गी र ब्याक्टेरियाको बृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ जहाँ जनावरहरूले पानी खसाल्दछन्। ब्रुयलरका लागि सबै भन्दा बढी प्रयोग भएको फोहोर भनेको काठ काट्ने काम हो। कहिलेकाँही विकल्पहरू जस्तै काटिएको कागज, काटिएको पराल र पल्भराइज्ड बार्क वा पीट प्रयोग गर्न सकिन्छ। चराको श्वासप्रश्वासको मार्गलाई फोहोरले धूलोले उडायो। Tered०,००० सम्म ब्रुयलर एउटा घरमा उठेको हुन सक्छ, लिटरको भुइँहरूमा। ब्रोकरहरूको उत्पादन चक्र औसतमा days२ दिन मात्र लिन्छ। यस अवधिमा कुखुराहरू 1० ग्रामदेखि करिब २००० ग्रामसम्म बढ्नेछ। यसैले, बढ्दो अवधिको अन्तमा, घरहरू जनावरहरूले राम्ररी भरिन्छन् र उनीहरूका क्रियाकलापहरूले हावामा धूलोको स्तर बढाउँछ। चरा बिछ्याउनेहरूमा, यद्यपि भण्डारण घनत्व कम छ, तर प्रदूषणमा यस फाइदाजनक प्रभाव, तथापि, लामो आवास अवधि द्वारा अफसेट गरिन्छ। नतीजा मलको ठूलो भण्डार हुन्छ, सामान्यतया खाडलहरूमा, जुन केवल कहिलेकाँही खाली गरिन्छ।ह्यारी, १ 1978 .XNUMX)। तसर्थ, यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि विशेष गरी कुखुरा घरहरूमा अमोनिया, वायुजनित धूलो, एन्डोटोक्सिन र सूक्ष्म जीवहरूको उच्च सrations्द्रता मापन गर्न सकिन्छ (Wathes et al।, १ 1998 XNUMX).
मोटोपना सुँगुरहरूलाई ग्रिड फ्लोर पेनमा राखिन्छ र यसैले उनीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्वका लागि आफ्नै मल र मूत्रको धुँवामा पर्दछ जुन 6--7 महिना भन्दा बढीको हुँदैन। साथै धेरै पिग्रीहरूमा उच्च स्तरको अमोनिया, वायुजनित धूलो, एन्डोटोक्सिन र माइक्रो जीवहरू फेला पार्न सकिन्छ (Wathes et al।, १ 1998 XNUMX).
स्वाइन र कुखुरा कैद भवनहरूमा भित्री वातावरण यसैले बाहिरको वातावरण भन्दा धेरै उच्च सांद्रता मा विषालु ग्याँस, dusts र endotoxin हुन्छ। न्यूनतम भेन्टिलेसन बाहेक, कमजोर स्थिर डिजाइनले वायुवीजनको कमजोर समरूपताका कारणले स्थानीय रूपमा स्थिर एयर जेबको कारण गर्दछ। यस अनुसार डोन्हाम (१ 1991 XNUMX १)), पिग्रीहरूमा ग्यास वा दूषित पदार्थहरूको अधिकतम सांद्रता सिफारिश गरिएको छ: २.2.4 मिग्रा धूलो / मीटर3; P पीपीएम अमोनिया, ०.०7 मिलीग्राम एन्डोटोक्सिन / मि3, 105 कुल माइक्रोब / एमको उपनिवेश बनाउने इकाइहरू (cfu)3; र १,1,540० पीपीएम। कार्बन डाइअक्साइड १.१ x १० सम्म ब्याक्टेरियाहरूको सांद्रता6cfu / m3, ०.0.26 मिलीग्राम / मिटरको अतुलनीय धुलो सामग्री3 र २ p पीपीएमको अमोनिया एकाग्रता हिउँदमा सुविधाहरूमा भएको रिपोर्ट गरिएको छ, जबकि गर्मीमा कम सघनता मापन गरिएको थियो (स्केयरर र अनशेलम, १ 1995 XNUMX)। गर्मी मा भित्र र बाहिरी तापमान को बीच कम अन्तर इमारतों को राम्रो वेंटिलेशन अनुमति दिन्छ।
सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा बढी श्वासनीय कणहरूको अंश भनेको मल्टिक कणहरू हुन्छन् जसमा इन्टरिक ब्याक्टेरिया र एन्डोटोक्सिन हुन्छन् (पिक्रेल, १ 1991 XNUMX १)। यी वायुजनित ब्याक्टेरियाहरू र एन्डोटाक्सिनको सांद्रता, अवश्य पनि, कलम सफाईको स्तरसँग सम्बन्धित छ। उत्पन्न विषालु ग्याँसहरूको बारेमा, हावामा अमोनिया एकाग्रता मुख्य रूपमा कलम स्वच्छताको स्तरबाट प्रभावित हुन्छ, तर भवनको खण्ड, सुँगुर घनत्व र सुँगुर प्रवाह व्यवस्थापनबाट पनि (स्केयरर र अनशेलम, १ 1995 XNUMX)। यसबाहेक, मौसम एक भूमिका खेल्छ साथै द्वारा देखाइएको थियो स्केयरर र अनशेलम (१ 1995 XNUMX।))। अमोनिया स्तरमा उस्तै कारकहरू farrowing इकाइहरू र कुखुरा घरहरूमा एक भूमिका खेल्न जानिन्छ (ह्यारी, १ 1978 .XNUMX)। अमोनिया कृषिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण साँसको विषाक्त मानिन्छ। डड एण्ड ग्रस (१ 1980 .०)) रिपोर्ट गरे कि २ p घण्टा भन्दा कमको लागि १००० पीपीएमले म्यूकोसल क्षति, बिग्रेको सिलियरी गतिविधि, र प्रयोगशालाको जनावरहरूमा दुय्यम संक्रमणको कारण गर्दछ। यो स्तर लगभग कहिल्यै हासिल गर्न नसकिने हुनाले यो बरु दीर्घकालीन, निम्न स्तरको अमोनियामा हुने एक्सपोजर हो जुन श्वास रोगजनक सूक्ष्म जीवहरूमा जन्मजात प्रतिरक्षाको विघटन पछि म्यूकोसल डिसफंक्शनको लागि यसको क्षमतासँग सम्बन्धित देखिन्छ।डेभिस र फोस्टर, २००२)। सामान्यतया, क्रमिक अमोनिया जोखिमको विषाक्त प्रभावहरू निम्न श्वासप्रश्वासको पथमा विस्तार हुँदैन (डेभिस र फोस्टर, २००२).
सुंगुरहरूमा अमोनिया र एन्डोटोक्सिनको संयुक्त प्रभावले जनावरहरूलाई भाइरस र ब्याक्टेरिया, जो दुवै प्राथमिक रोगजनक र अवसरवादी प्रजातिहरूको संक्रमण हुन सक्छ। जे होस् खाना उत्पादन गर्ने जनावरहरू श्वसन रोगको चिह्नित डिग्रीको बावजुद उच्च स्तरको दक्ष बृद्धि कायम गर्न सक्षम देखिन्छ (विल्सन एट अल।, 1986), श्वासप्रश्वास अपर्याप्तताको एक निश्चित स्तरमा द्रुत वृद्धि अब प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो अवस्थामा उत्पादन परिणामहरू uneconomically हुनेछ। भेन्टिलेसन प्राय: स्वीकार्य स्तरमा हुन्छ। तिनीहरूको सिंहावलोकनमा, ब्रोकमीयर एट अल।, (२००२)) पोर्सिन श्वास रोगहरूमा तथ्यहरूको सारांश। तिनीहरू आज औद्योगिक सुँगुर उत्पादनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या हो। १ 1990 1994 ० देखि १ 582from सम्म स Data्कलन गरिएको तथ्या्कले उच्च स्वास्थ्य बथानमा राखिएका सुँगुरहरूको वधमा निमोनियाको% 2% व्यापकता देखा पर्‍यो। यी जनावरहरू उत्तम फार्मबाट उत्पत्ति भएका हुनाले कम व्यवस्थित फार्महरूमा निमोनिया हुने घटना बढी हुन्छ। स्वाइनमा श्वासप्रश्वासको रोग प्रायः प्राथमिक र अवसरवादी संक्रामक एजेन्टहरूको संयोजनको परिणाम हो, यसैले प्रतिकूल वातावरणीय र व्यवस्थापन अवस्था ट्रिगर हो। प्राथमिक श्वासप्रणाली संक्रामक एजेन्टहरूले आफ्नै रोगले गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्छ, तथापि, प्राय जसो असम्भव संक्रमणहरू देख्न सकिन्छ। अधिक गम्भीर श्वास रोग देखा पर्दछ यदि यी प्राथमिक संक्रमण अवसरवादी ब्याक्टेरियाको साथ जटिल भयो। साधारण एजेन्टहरू पोर्सिन प्रजनन र श्वासप्रश्वास सिन्ड्रोम भाइरस (PRRSV), स्वाइन इन्फ्लूएन्जा भाइरस (SIV), pseudorabies भाइरस (PRV), सम्भवतः पोर्सिन श्वसन कोरोनाभाइरस (PRCV) र पोर्सिन सर्कोभेरस प्रकार २ (PCVXNUMX) र Mycoplasma हुन्। hyopneumoniae, बोर्डेल्ला ब्रोन्चिसेप्टिका, र एक्टिनोब्यासिलस प्लीउरोप्नेमोनिया. Pasteurella multocida, सबैभन्दा सामान्य अवसरवादी ब्याक्टेरिया हो, अन्य सामान्य अवसरवादीहरू हुन् हेमोफिलस परजीवी, स्ट्रेप्टोकोकस सूइस, एक्टिनोबासिलस सुइस, र अर्कानोबाक्टेरियम pyogenes।
सुँगुर वा कुखुरा सुविधाहरूमा कामदारहरूले कार्बन मोनोअक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, वा फीड र मलबाट धुलो कणहरू जन्तुहरूको रूपमा (पिक्रेल, १ 1991 XNUMX १)। नतिजा स्वरूप, स्वाइन उत्पादनमा काम गर्ने मजदुरहरूको अस्थमा र श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू कुनै अन्य व्यावसायिक समूहको तुलनामा बढी हुन्छन्। म्याक डोन्नेल एट अल। (२०० 2008)) आयरिश स्वाइन फार्म मजदुरहरूको ध्यान केन्द्रित पशु आहार संचालनमा अध्ययन गरे र उनीहरूको व्यवसायिक जोखिमलाई विभिन्न श्वासप्रश्वासको जोखिममा नापे। यस्तो देखिन्थ्यो कि स्वाइन कामदारहरूले अनावश्यक (०.०–-.0.25. mg मिलिग्राम / एम)) र श्वास योग्य (०.०१-–. mg मिग्रि / एम)) स्वाइन धुलो र वायुजनित एन्डोटोक्सिन (१7.6० ईयू / एम)) को उच्च सांद्रतामा पर्दा देखा पर्‍यो। यसबाहेक, hour घण्टाको भारित औसत अमोनिया र पीक कार्बन डाइअक्साइड एक्सपोजर क्रमशः ०.०१- p p पीपीएम र ––०-–3० पीपीएम देखि।
उत्पादन जनावरहरूमा वायु प्रदूषणको कारण हुने घाँसहरूले मुख्यतया भड़काउने प्रक्रियाहरू समावेश गर्दछ। नियोप्लास्टिक रोगहरू भन्दा असामान्य हुन्। यसले मुख्य रूपमा घर भित्र राखिएको स्वाइन जस्ता जनावरहरूको लागि, साथै गाईवस्तु र भेडाहरूको लागि पनि होल्ड गर्दछ जुन घरका बाहिर उनीहरूको जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अंश राखिन्छ। यो एक abattoir सर्वेक्षण देखाइएको थियो लगभग decades दशक पहिले ग्रेट ब्रिटेनभरि १०० abattoirs मा एक बर्षको अवधिमा गरिएको (एन्डरसन एट अल।, 1969)। सबै ट्यूमरहरू जम्मा १.1.3 मिलियन गाई, 4.5. million मिलियन भेडाहरू र 3.7. million मिलियन सुंगुरहरूमा रेकर्ड गरिएका थिए र हिस्टोलोगिक रूपमा टाइप गरिएका थिए। केवल 302०२ नियोप्लासिआहरू गाईवस्तुमा भेटिए, भेडाहरूमा १०107 र सुँगुरहरूमा १ 133 25। लिम्फोसारकोमा तीनै प्रजातिहरूमा साधारण विकृति थियो। लिम्फोसाकोमा पूर्ण रूपमा छिटपुट रूपमा मानिन्थ्यो, किनकि धेरै केसहरू भएका बथानहरू बेलायतमा फेला परेन। अर्को रूप, एक लेन्टीवायरस संक्रमण जसले इन्जाुटिक बोवाइन ल्युकेमियाको प्रकोप निम्त्याउँछ त्यस दिन बेलायतमा थिएन। गाईवस्तुमा २ 8.3 प्राथमिक फोक्सोको कार्सिनोमा एसिनर र प्यापिलरी संरचना, स्क्वामस र ओट-सेल फार्महरू र बहु-सेलल र प्लोमोर्फिक प्रकारका धेरै एनाप्लास्टिक कार्सिनोमासँग राम्रो-भिन्न छुट्याइएको थियो। उनीहरूले सबै नियोप्लाज्महरूमा ms..19% मात्र प्रतिनिधित्व गरे, जुन १ लाख जनावर मार्ने १ of% को दरमा देखापर्दछ। भेडा वा सुँगुरहरूमा कुनै प्राथमिक फोक्सोको क्यान्सर सामना भएन।
आउटडोर वायु प्रदूषणले सहरी र पेरी-शहरी क्षेत्रमा चराहरूमा राखिएको खेत जनावरहरूलाई असर गर्न सक्छ। विगतमा (१ 1952 XNUMX२), लन्डनमा एउटा ठूलो धुवाँको प्रकोपले जनावरहरूको प्रदर्शनको लागि शहरमा राखिएका इनामी गाईवासहरूको श्वासप्रश्वासको समस्या भएको खबर गरियो।क्याटकट, १ 1961 .१)। यो सम्भवतः सल्फर डाइअक्साइडको उच्च स्तरको हुन सक्छ जुन तीव्र ब्रोन्कोइलाइटिस र यसको साथमा एम्फाइसेमा र दाहिने-पक्षीय हृदय विफलताको लागि जिम्मेवार थियो। शहरका केही फार्महरू केन्द्रको सट्टा शहरहरूको परिधिमा अवस्थित भएकाले उत्पादन जनावरहरूद्वारा प्रदूषकहरूको साँघुरो सांद्रता सहरका केन्द्रहरूमा बस्ने वा औद्योगिक सम्पत्ति नजिक भएका पालतु जनावरहरूले साँघुरो बनाएको सांद्रता भन्दा कम हुन सक्छ।
साथी जनावरहरू: कुकुर र बिरालाहरू
बुकोवस्की र वार्टेनबर्ग (१ 1997 XNUMX।)) एक समीक्षा मा इनडोर वायु प्रदूषण को प्रभावहरु को विश्लेषण को सम्मान मा घरेलु जनावरहरु में रोगजनक खोज को महत्त्व स्पष्ट वर्णन। Radon र सुर्ती धूम्रपान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्वसन इन्डोर कार्सिनोजन मानिन्छ। पहिले नै years२ बर्ष पहिले रागलल्याण्ड र गोरहम (१ 1967 XNUMX)) रिपोर्ट गरे कि फिलाडेल्फियाको कुकुरहरुमा ग्रामीण क्षेत्रका कुकुरहरु भन्दा आठ गुणा बढी टन्सिलर कार्सिनोमा हुने खतरा छ। मूत्राशयको क्यान्सर (हेस एट अल।, १ 1981 XNUMX१), मेसोथेलियोमा (हार्बिसन र गोडलेस्की, १ 1983 XNUMX), फोक्सो र नाक क्यान्सर (रीफ एट अल।, १ 1992 XNUMX २, 1998) कुकुरहरूमा मानव-भित्रका गतिविधिहरू द्वारा जारी कार्सिनोजनसँग दृढ रूपमा सम्बद्ध छ। बिरालाहरूमा, निष्क्रिय धूम्रपानले घातक लिम्फोमाको घटना बढायो (बर्टोन एट अल, २००२)। मूत्र कोटिनिन मापन गरेर, बिरालाहरूको निष्क्रिय धूम्रपान मापन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, लेट क्याथरीन भोंड्रोकोभले (अप्रकाशित नतिजाहरु) पत्ता लगाए कि घरपरिवारमा चुरोट खाने र पारिवारिक बिरालाको पेशाबमा कोटिनको मात्राको कुनै सीधा सम्बन्ध छैन। यद्यपि, त्यहाँ प्रमाणहरू छन् कि खुला बिरालाहरूले कम फोक्सोको कार्य देखायो। विशेष गरी साना जनावरहरू र बिरालाहरूमा फोक्सोको कार्यको मापन गर्न गाह्रो हुन्छ र प्राय: जसो सम्भवतः सम्पूर्ण शरीरको अनुकूलता (हर्ट एट अल, २००।)। यस उद्देश्यका लागि बिरालालाई पर्सपेक्स फेथस्मिग्राफी बक्समा राखिएको छ। यस विधिसँग पर्याप्त शुद्धता छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्न बाँकी छ (भ्यान डेन होभेन, २००।).
साथी जनावरहरूमा बाहिरी वायु प्रदूषणको प्रभाव, अहिलेसम्म, विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिएको छैन। क्याटकाट (१ 1961 XNUMX१)) तथापि वर्णन गरियो कि १ 1954 15 मा डोनोरा, पेन्सिल्भेनियामा धुम्रपानको घटनामा १ dogs% शहरहरूमा कुकुरहरूले बिरामी परेको रिपोर्ट गरिएको थियो। केही मरे। रोगी कुकुर प्राय: १ बर्ष भन्दा कम उमेरको थियो। लक्षणहरू प्रायः resp- days दिनसम्म चल्ने हल्का श्वासप्रश्वासको समस्याहरू थिए। केही बिरालाहरू पनि बिरामी परेको रिपोर्ट गरिएको थियो। १ irect .० को पोजा रिका मेक्सिकोमा धुम्रपान गर्ने प्रकोपको बेला भएका पर्यवेक्षणहरूद्वारा प्रदान गरिएका अप्रत्यक्ष प्रमाणहरू अवस्थित छन्। धेरै घरपालुवा जनावर बिरामी वा मरेका थिए। विशेष गरी क्यानरी चराहरू संवेदनशील देखाए किनभने १००% जनसंख्या मरे (क्याटकट, १ 1961 .१)। कुकुर र बिरालाहरुमा मृत्युको कारण, जबकि व्यावसायिक रुपमा स्थापित गरिएको थिएन; जानकारी केवल यो थियो कि मालिकले रिपोर्ट गरेका थिए, जब घटनालाई सोधे।
हालै, मानजो एट अल। (२०१०)) रिपोर्ट गरे कि क्रोक ब्रोन्काइटिस भएका कुकुरहरू र एयरवेज इन्फ्लेमेटरी रोगका साथ बिरालाहरूले उनीहरूको अवस्थालाई बढाउने जोखिम बढी हुन्छ भने यदि लामो शहरी वायु प्रदूषकहरूको सम्पर्कमा पर्‍यो भने। यस सन्दर्भमा उनीहरूले मानिस जस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन्। लेखकहरूले मेडिकल थेरापीद्वारा भइरहेको भडकाउने प्रक्रियाहरूलाई दबाउन र शहरी क्षेत्रहरूमा घरपालुवा जनावरहरू शिशु प्रदूषक अवधिमा व्यायाम गर्नबाट जोगिन सल्लाह दिन्छन्।
घोडाको पालोपनको कारण यसको एथलेटिक क्षमतामा श्रेय दिन पर्छ। शान्त गधा र गोरु प्रारम्भिक मस्यौदा जनावरको रूपमा पालेका थिए। घोडा स्तनपायी हो र सब भन्दा उच्च सापेक्ष अक्सिजन अपटेक हो र त्यसैले उच्च वेगमा लामो दूरी कभर गर्न सक्षम छ। आराममा 500०० केजीको घोडाको ज्वलन्त मात्रा 6--7 एल र रेसि g ग्यालप १२-१-12 एल हो। बाँकीमा एउटा घोडाले प्रति मिनेट -०-15० एल सास लिन्छ, जुन लगभग १०,००० एल / दिनसँग मिल्छ। दौडको क्रममा, भेन्टिलेसन दर १ 60०० एल / मिनेट सम्म बढ्छ। श्वासप्रश्वासको ट्रयाक भित्र र बाहिर यस विशाल परिमाणको हावा सर्ने क्रममा ठूलो मात्रामा धुलो कणहरू साँस पारिन्छन् र वायुमार्गमा तलछर्क हुन सक्छ। यसको अवधिमा यसले फोक्सोको कार्यको लागि प्रतिकूल नतिजा लिन सक्छ। फोक्सोको कार्यको कुनै कमीले घोडाको प्रदर्शनलाई कुनै पनि दूरीमा 70०० मिटर भन्दा लामो दूरीमा असर गर्न सक्छ। श्वासप्रश्वास समस्याहरूको दौड घोडाको रेसिंग क्यारियरमा सीधा प्रभाव पार्छ, यदि सफलतापूर्वक उपचार गरेन। कम गहन व्यायाममा बुझाइएको घोडाहरू, यद्यपि धेरै लामो समय सम्म आशा गर्न सकिन्छ, यदि तिनीहरू फोक्सोको कार्यको सानो कमीबाट मात्र प्रभावित हुन्छन्। यो सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ यदि कसैले इक्वाइन कार्डियोपल्मोनरी प्रणालीको विशाल क्षमतालाई विचार गर्दछ। खेल घोडाको शारीरिक पक्षहरूको एक सिंहावलोकन द्वारा दिइएको छ भ्यान डेन होभेन (२०० 2006)).
घोडाले तम्बाकूको धुँवा वा विकिरणको नकरात्मक प्रभावको प्रभावमा पर्दैन, किनकि अस्तबल र मानिसका कोठामा प्राय: जसो हावाको स्थान हुँदैन। यद्यपि यसले स्वचालित रूपमा घोडा स्थिरमा स्वस्थ वातावरण हुन्छ भन्ने संकेत गर्दैन। ती देशहरूमा जहाँ घोडाहरू स्टालमा राखिन्छन्, सबसुट र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर रोगहरू गम्भीर र सामान्य समस्याहरू हुन्। न्यूजील्याण्ड जस्ता देशहरूमा, जहाँ घोडाहरू प्रायः बाह्य घरमै बसोबास गर्छन्, यी रोगहरू कम परिचित छन्। धेरै घुड़सवार उद्यमहरू शहरीकृत क्षेत्रहरूको परिधिमा अवस्थित छन्। यसैले सहरी वायु प्रदूषण स्वास्थ्य इनडोर वायु गुणस्तर द्वारा स्वास्थ्य चुनौतीको अगाडि विचार गर्नुपर्छ। उपनगर र शहरी उद्यमहरूमा प्रायः वयस्क जनावरहरू कार्यरत छन्। राईडिंग स्कूलहरू, रेसहर्स ट्रेनिंग यार्डहरू र फ्याक्रे घोडा उद्यमहरू यार्डको उदाहरण हुन् जुन शहर पार्क वा सहरी हरियो क्षेत्रहरूमा वा यसको नजिकै अवस्थित हुन सक्छ। यी पछाडिको घोडा या त भण्डारमा वा व्यक्तिगत खुल्ला-फ्रन्टेड लूज बक्सहरूमा राखिन्छ। पछिल्लाका शीर्ष ढोका छन् जुन प्राय: खुला छोडिन्छ (जोन्स एट अल।, 1987) क्रममा हावा सर्कुलेशनलाई अनुकूलन गर्न। जे होस्, यी बक्सहरूमा उनीहरूको साना ढोकाका कारण, / / ​​घण्टाको न्यूनतम वायु परिवर्तन दर सायद गाह्रो हुन्छ (जोन्स एट अल।, 1987).
साना जनावरहरू मुख्यतया ग्रामीण इलाकामा राखिन्छ, प्राय जसो स्टड फार्महरूमा। यहाँ तिनीहरू आंशिक वा लगातार बाहिर ढोका बाहिर राखिएको छ। हिउँदमा र घोडा लिलामी भन्दा पहिले जवानहरूलाई लामो अवधिको लागि सक्षम बनाइनेछ, केवल त्यति नै क्षणमा तिनीहरू मध्ये धेरैलाई उपनगरी वा शहरी उद्यममा पठाइनेछ। अन्य युवा जनावरहरू ग्रामीण इलाकाहरूमा रहनेछन्। जनावरहरूको एक विशेष कोटी प्रजनन जनावरहरू हुन्। (उप) शहरी वातावरणमा छोटो वा लामो अवधिको लागि खेल कार्यक्रमहरूमा सेवा गरिसकेपछि, यी जनावरहरू गाउँमा फर्कन्छन्। मारे स्टालियन्समा प्रजनन गरिन्छ र प्राय: सबै दिन चराउने ठाउँमा राखिन्छ, वा कमसेकम दिनको एक भाग। यदि राखिएको छ भने, अस्तबलहरू राम्रोसँग राम्रोसँग डिजाइन गरिएको हुँदैन र दौड घोडा जस्ता परम्परागत हुन्छ। तसर्थ, खराब हावाको गुणस्तरको सम्भावना ब्रुडमेर्समा असामान्य हुँदैन। ब्रीडिंग स्टेलियनहरूसँग सीमित स्वतन्त्रता छ, र अझै दिनको ठूलो भाग खलिहानमा रहन्छ। स्टालियन बार्नहरू प्रायः मरेका लागि भन्दा राम्रोसँग डिजाइन गरिएको हुन्छ; प्राय: बढी मूल्यवान स्टेलियन्ससँग खुला-फ्रन्ट बक्स हुन्छ।
मुख्य रूपमा लगभग सबै घोडा खराब जीवनको खराब जीवनको एक परिवर्तन अवधिमा उजागर गरिनेछ। (उप) शहरी क्षेत्रहरूमा खेल र काम गर्ने घोडा सक्षम र व्यायाम गरिएका ट्राफिक र औद्योगिक गतिविधिहरूले गर्दा वायु प्रदूषणको प्रभावमा पर्दछन् (Fig.1।)। भित्री र बाहिरी वायु प्रदूषणले हाम्रो घोडाको फोक्सो स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्नुपर्दछ। त्यसकारण यो अप्रत्याशित छैन कि श्वसन रोग विश्वव्यापी घोडा उद्योगहरूको लागि प्रमुख समस्या हो (बेली एट अल।, 1999).
घोडाका लागि परम्परागत स्थिर डिजाइन अन्य कृषि प्रजातिहरूको अध्ययनबाट विस्तार गरिएको गैर-अनुभवजन्य सिफारिसहरूमा आधारित छ (क्लार्क, 1987), अक्लीट एथलिटको आवश्यकतामा मौलिक भिन्नताहरूलाई वेवास्ता गर्दै। २०१० मा अहिले पनि घोडाको केही अंश आधुनिक राम्ररी डिजाइन गरिएको स्टेबेलमा राखिएको छ। तर पनि पारम्परिक अस्तबलमा, करीव १२ मिटरको मिडियन फ्लोर स्पेसको साथ2 (जोन्स एट अल।, 1987) भण्डारण घनत्व उत्पादन जनावरहरू भन्दा धेरै कम छ। यसबाहेक, धेरै घोडाको आफ्नो व्यक्तिगत बस्ने क्षेत्र छ, तर अझै पनी कमजोर हवाको गुणस्तरको साथ साझा एयरस्पेस साझा गर्दछ।
साधारण वा व्यक्तिगत वायु स्थानमा जैविक धूलो, ओछ्यान र घाँसको चाल द्वारा जारी गरिएको घोडा अस्थिरहरूमा प्रमुख प्रदूषक हो (Ghio et al।, 2006)। कहिलेकाँही स्टोलमा धूलोको स्तर mg मिलीग्राम / मिटर भन्दा कम हुन्छ3, तर मिकि out आउट गर्ने क्रममा, रकम १०-१ / मिलिग्राम / मि3, जसमध्ये २० - 20०% श्वासनीय कणहरूको हो। घाँस खानको बखत सासको क्षेत्रको स्तरमा मापन गरिन्छ, स्थिर कोरिडोरमा नापे भन्दा धूलोको स्तर २० गुणा बढी हुन सक्छ (वुड्स एट अल।, 1993)। १० मिलीग्राम / मिटरको धुलो सrations्द्रता3 मानवमा ब्रोन्काइटिसको उच्च व्यापकतासँग सम्बन्धित छ भनेर चिनिन्छ। घास र ओछ्यानको बाहेक, खाद्यान्न खानामा धुलोको पर्याप्त स्तर हुन सक्छ। यो देखाइएको छ कि सुक्खा रोल गरिएको अन्नमा --० - -०-गुना बढी अनाज धुलो हुन सक्छ सम्पूर्ण अनाज वा गुडसँग मिसिएको दानासँग मिसिन्छ (भान्डनपुट एट अल।, १ 1997 XNUMX)। रेसरिबल धुलो μ μm भन्दा सानो कणको रूपमा परिभाषित गरिएको छ (म्याकगोरम एट अल।, १ 1998 XNUMX।)। रेफरिएबल कणहरू एल्भोलर झिल्लीसम्म पुग्न सक्षम छन् (क्लार्क, 1987) र alveolar सेलहरू र क्लारा कक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। यस सम्बन्धमा वर्तमान खोज द्वारा स्नाइडर एट अल।, (२०११)) रासायनिक र आनुवंशिक माउस मोडेलमा क्लारा सेल र क्लारा सेल सेक्रेटरी प्रोटीन (CCSP) को कमी जोड्छ स्यूडोमोनसको साथ एरुगिनोसा LPS elicited सूजन पुरानो फोक्सोको क्षतिको पैथोफिजियोलोजीमा नयाँ समझ प्रदान गर्दछ। यस अध्ययनमा लेखकहरूले एयरवे एपिथेलियमको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी भूमिकाको प्रमाण प्रमाणित गरे र क्लारा कोषहरूले सम्भवतः यस प्रक्रियालाई विनियन्त्रित गरेको संयन्त्रको प्रक्षेपण गरे। घाइते वायुमार्ग एपिथेलियम र चूहोंको कमी सीसीएसपीको अभिव्यक्तिमा इनहेल्ड एलपीएसको अधिक कडा प्रतिक्रिया गर्दछ, जसले पीएमएनको भर्ती बढाउँदछ।
Kaup et al। (१ 1990 XNUMX ० बि) उल्लेख गर्नुहोस् कि उनीहरूको अल्ट्रास्ट्रक्चरल अध्ययनले सुझाव दिन्छ कि क्लोरा सेलहरू एन्टिजेन्स र ईन्फ्लिनेशनको विभिन्न मध्यस्थकर्ताहरूको लागि मुख्य लक्ष्य हो जुन ब्रोन्कियल परिवर्तनको समयमा हुन्छ जुन बारम्बार एयरवे अवरोध (आरएओ) को साथ घोडामा हुने हुन्छ।
स्थिर धुलोको मुख्य घटकहरू मोल्ड स्पोरहरू हुन् (क्लार्क, 1987) र यसले कम्तिमा known० ज्ञात प्रजातिहरू फंगी र एक्टिनोमाइसेटहरू समावेश गर्न सक्दछ। यी सूक्ष्म जीवहरू प्राय जसो प्राथमिक रोगजनकहरूको रूपमा मानिदैन। कहिलेकाँही गट्टुरल पाउचको साथ संक्रमण Aspergilles fumigatus हुन सक्छ (चर्च एट अल।, १ 1986 XNUMX)। गट्टुरल थैली यूस्टाचियन ट्यूबको m०० एमएल डायभर्टिकुलम हो (छवि २).
गट्टुरल पाउचको भित्ताहरू खोपडीको आधार, केही क्रैनियल स्नायुहरू र आन्तरिक क्यारोटिक धमनीको साथ सम्पर्कमा हुन्छन्। वायु थैलीको फ fun्गल संक्रमणको मामिलामा, फgal्गाल पट्टिका सामान्यतया पृष्ठीय छतमा अवस्थित हुन्छ, तर अरू पर्खालहरूमा पनि कब्जा गर्न सक्छ (चित्र))। ढुसीले छेउछाउ धमनीको भित्तामा आक्रमण गर्न र कमजोर पार्न सक्छ। परिणामस्वरूप रक्तस्राव सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिदैन र घोडा रगतको घाटाले मर्दछ।
सुक्खा मल द्वारा उत्पन्न धूलो मा उपस्थित ब्याक्टेरिया को इनहेलेसन संग सम्बन्धित एक विशेष संक्रमण निमोनियाले गर्दा हुने निमोनिया हो रोडोकोकस ईक्वी युवा फोल्स को (हिलिज, १ 1986 XNUMX). R.equi इम्यूनोलोजिकली अपरिपक्व वा प्रतिरक्षा-अभाव घोडाहरूमा सर्त रोगजनक रोग हो। यसले इम्यूनो सम्झौता भएको मानिसमा पनि रोग निम्त्याउन सक्छ। को रोगजनकको कुञ्जी R. equiनिमोनिया भनेको जीवको बाँच्न र फ्यागोसिटोसिस पछि फ्यागोसोम-लाइजोम फ्यूजन रोक्दै अल्भोलर म्याक्रोफेज भित्र नक्कल गर्न सक्ने क्षमता हो। केवल विषाक्त तनावहरू R. equi भाइरुलेन्स-सम्बन्धित प्लाज्मिड-एन्कोड १–-१– केडीए प्रोटीन (VapA) को पछाडिको रोगको कारण (बायर्न एट अल।, 2001; वाडा एट अल, १ 1997 XNUMX)। यो ठूलो प्लाज्मिड म्याक्रोफेज भित्रै इंट्रासेल्युलर बाँच्नको लागि आवश्यक छ। VapA पछि एक antigenically सम्बन्धित 20-kDa प्रोटीन, VapB ज्ञात छ। यी दुई प्रोटीन तथापि एक द्वारा व्यक्त छैन R. equi अलग थप जीनहरू वाहक भेरुलन्स प्लाज्मिडहरू जस्तै: भ्यापसी, -डी र –E ज्ञात छन्। यी सह-संयोजित रूपमा VapA संग तापमान द्वारा विनियमित छन् (बायर्न एट अल।, 2001)। पहिलो अभिव्यक्ति तब हुन्छ जब R. equi ° 37 डिग्री सेल्सियस मा संवर्धित छ, तर 30० डिग्री सेल्सियस मा छैन यसैले यो व्यवहारिक छ कि धेरै जसो केसहरु R. equi गर्मी महिनाहरुमा निमोनिया देखिन्छ। को व्यापकता R. equi निमोनिया थप विषालुको हावायुक्त बोझको साथ सम्बन्धित छ R. equi, तर अप्रत्याशित रूपमा यो सीधा वायरलको बोझको साथ सम्बन्धित छैन जस्तो देखिन्छ R. equi माटोमा (मस्कटेल्लो एट अल, २००।)। केवल माटोको विशेष सर्तहरूमा, विषालु जीवहरू फोल्सको लागि धागो हुन सक्छन्। सुक्खा माटो र थोरै घाँस र कलम र लेनहरू जो बलौटे, सुख्खा र पर्याप्त घाँसको अभाव हुँदैन विषाक्तको उचाइमा हावामा रहेको सांद्रतासँग सम्बन्धित छ। R. equi। यसैले, मस्कटेल्लो एट अल। (२००।)) विचार गर्नुहोस् कि वातावरणीय व्यवस्थापन रणनीतिहरू संवेदनशील फोलोको जोखिमको स्तरलाई वायुजनित विषाक्तमा कम गर्न लक्षित गर्दै R. equi सम्भावितको प्रभावलाई कम गर्दछ R. equi सामान्य रूपमा प्रभावित फार्महरूमा निमोनिया।
यदि दूषित धुलो month महिना भन्दा कमको फोल्स द्वारा साँस लिइयो भने फोक्सोको फोडा उत्पन्न हुन्छ (छवि 4)। चराउने मल र मलहरू मलको अदुवा ब्याक्टेरिया स्थापना गर्न को लागी एक शर्त हो। अन्य धूलोबाट जन्मेका जीवाणु संक्रमण घोडाहरूमा थाहा छैन। परिपक्व घोडाको वायुमार्गको रोगमा धुलोका अनावश्यक घटकहरूले प्रमुख भूमिका खेल्छन्।
कुनै पनि थ्रेसोल्ड सीमित मान (TLV) मोल्ड स्पोरहरू वा धुलोको लागि जोखिमको लागि अझै घोडा (व्हिट्कर एट अल।, २००।)। मानिस धुलो वातावरणमा h० घण्टा / हप्ताको लागि काम गर्दै, TLV १० मिलीग्राम / मिटर हो3 (बेनामी, १ 1972 XNUMX२)। जबकि,5मिलीग्राम / मिटर का कालोनिकल एक्सपोजर3 अन्न लिफ्टको संचालकमा फुफ्फुसीय समारोहको गम्भीर क्षति भयो (Enarson एट अल।, 1985)। पनि खान र नाचल, २००। मानिसमा व्यावसायिक फुफ्फुसीय रोगको विकासको लागि धूलो वा एन्डोटॉक्सिनको दीर्घकालीन जोखिम महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखायो। यस सम्बन्धमा धूल र एन्डोटॉक्सिनको संचयी जोखिम प्रभावको कारण लामो अवधिसम्म चापले श्वासप्रश्वासको विकार र घोडामा संवेदनशील हुने दुबै घोडामा पल्मोनरी रोगको विकासको परिणाम दिन सक्छ (अन्यथा स्वस्थ (व्हिट्कर एट अल।, २००।).
सामान्यतया, धेरै कार्बनिक धूलोको सम्पर्कमा आएका घोडाहरू हल्का, अक्सर subclinical तल्लो वायुमार्गको सूजन विकास गर्दछ। यसले खराब प्रदर्शनमा योगदान पुर्‍याउँछ (आईएडी हेर्नुहोस्)। लक्षणहरूले सुरुमा मानिसमा जैविक धूलो विषैले सिन्ड्रोमसँग साझा पक्षहरू साझा गरेको देखिन्छ।भ्यान डेन होभेन, २००।)। केही घोडाले जैविक धूलोमा गम्भीर hyperreactivity देखाउन सक्दछन् र जोखिम पछि दम जस्तै आक्रमण प्रदर्शन गर्नेछ (RAO हेर्नुहोस्)। विशेष गरी मोल्डी घाँसको खाना यसका लागि प्रसिद्ध जोखिम कारक हो (म्याकफेरसन एट अल।, १ 1979।)। सामान्यतया यस्ता संवेदनशील घोडाहरूको लागि इन्क्रिमिनेटेड एलर्जीनहरू बीजाणुहरू हुन् Aspergillus fumigatus र endotoxins। Β-glucans को विशिष्ट भूमिका अझै छलफलमा छ।
मोल्डहरूको उत्पत्ति घोडालाई दिएको फिडस्टफमा फेला पार्न सकिन्छ। बकले एट अल। (२०० 2007)) क्यानाडाली र आयरिश चारा, जई र व्यापारिक रूपमा उपलब्ध इक्वाइन कन्सन्ट्रेट फिडको विश्लेषण गरे र फेथोजेनिक फgi्गी र माइकोक्सोक्सिनहरू भेट्टाए। सबैभन्दा उल्लेखनीय फgal्गल प्रजातिहरू थिए एस्पर्गिलस र Fusarium। पचास प्रतिशत आयरिश घाँस,% 37% घाँस र क्यानाडाको घाँसमा १ path% रोगजनक फ contained्गीत थिए। इनहेलेसनले समस्या बाहेक, यी फgi्गाले माइकोटक्सिनहरू उत्पादन गर्न सक्छ जुन सास फेर्नु भन्दा फिडसँगै इन्जेस्टेड हुन्छ। T13 र zearalenone सबैभन्दा प्रमुख रूपमा देखा पर्‍यो। आइरिस घासको २१ प्रतिशत र pelleted फिडको १%% zearalenone समावेश गर्दछ, जबकि ats 2% ओट्स र 16 45% pelleted फिड T54 विषाक्त पदार्थ समावेश गर्दछ।
फgal्गाल एन्टिजेन्सको छेउमा, इनहेल्ड एन्डोटॉक्सिनहरूले घोडाहरूमा खुराक निर्भर एयरवे प्रक्षोभक प्रतिक्रिया ल्याउँछन् (पीरी एट अल, २००१) र रगत ल्युकोसाइट्समा प्रणालीगत प्रतिक्रिया पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ (पीरी एट अल, २००१; भ्यान डेन होभेन एट अल।, २००।)। घाउमा आरएओले पीडित एन्डोटाक्सिनहरूलाई सम्भवतः रोगको गम्भीरताका निर्धारक मात्र होइन, तर एयरवे सूजन र डिसफंक्शनको प्रेरणामा योगदान पुर्‍याउँछ (पीरी एट अल, २००१).
व्हिट्कर एट अल। (२००।)) अस्तबलमा घोडाको सासको क्षेत्रमा कूल धुलो र एन्डोटोक्सिन सांद्रता मापन गरियो। धुलो छ घण्टासम्म स I्कलन गरिएको थियो IOM मल्टि डस्ट पर्सनल नमूना (SKC) घोडाको सास फेर्ने क्षेत्र भित्र राखिएको र Sidekick नमूना पम्पमा जोडिएको। यस अध्ययनले पहिलेको अध्ययनलाई पुष्टि गर्‍यो कि बेडिंगको प्रकारको भन्दा घोडाको श्वासप्रश्वासको जम्मा र श्वासयोग्य धुलो र एन्डोटॉक्सिन सांद्रतामा फोरसले ठूलो प्रभाव पार्दछ।
तिनीहरूको बस्ने क्षेत्र अन्तर्गत स्लरी गहिराको अनुपस्थिति र कम भण्डारण घनत्वको कारण, घर भित्र उत्पन्न हुने हानिकारक ग्याँसहरूले साधारणतया इक्वाइन एयरवे रोगको विकासमा कम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यद्यपि, स्थिर स्थिर स्वच्छताको साथ, युरेज उत्पादन गर्ने मल मूत्रद्वारा पिसाबबाट निकाल्ने अमोनियाले वायुमार्ग रोगमा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
खुला हावामा काम गर्ने घोडाहरूमा वायु प्रदूषणको प्रभावको विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन, तर ओजोनमा गरिएको केहि अध्ययनले देखाए कि घोडाले मानिस र प्रयोगशालाको जनावरहरूको तुलनामा ओजोनको गम्भीर असरहरूप्रति कम संवेदनशील देखिन्छ (टायलर एट अल।, १ 1991 XNUMX १; मिल्स एट अल।, 1996). मर्लिन एट अल। २००१ फेला पर्‍यो कि फुफ्फुसीय अस्तर तरल पदार्थमा ग्लुटाथियोनको एन्टि-ऑक्सीडन्ट गतिविधि सम्भाव्य रूपमा घोडामा अत्यधिक कुशल सुरक्षात्मक संयन्त्र हो। यद्यपि यो सम्भव छैन कि घोडामा श्वास रोगको विकासको लागि ओजोन महत्त्वपूर्ण जोखिमको कारक हो, ओजोनको क्षमतालाई अन्य एजेंटहरूसँग वा पहिले नै अवस्थित रोगको साथ एक थप जोड्ने वा synergistic तरिकामा कार्य गर्न बेवास्ता गर्न सकिँदैन। फोस्टर (१ 1999 XNUMX।)) वर्णन गरे कि यो मानवमा हुन्छ। खराब वायु गुणस्तरसँग सम्बन्धित रोगहरू फोलिक्युलर फरेन्जाइटिस, इक्वाइन इन्फ्लेमेन्टरी एयरवे रोग र बारम्बार एयरवे अवरोध हो।
ठूला शहरहरूमा वायु प्रदूषणको प्रभावमा पर्ने व्यक्तिमा, श्वासनीय कणहरू र विषालु ग्यासको स्तर तीव्र र सबस्यूट कार्डियोपल्मोनरी मृत्युदरसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ (न्युबर्गर एट अल, २००।)। शहरी वायु प्रदूषणको प्रभावमा रहेको घोडामा त्यस्ता प्रभावहरू देखिएन।
घोडाहरूमा फोलिकुलर फरेन्जाइटिसले ग्रसनी व्यासलाई संकुचित पार्छ र उच्च गतिमा भेन्टिलेसनको कमजोरीको साथ माथिल्लो श्वसन वायुमार्ग प्रतिरोध बढाउँछ। लक्षणहरू उच्च-व्यायाम अभ्यासको बखत in- र समयावधि मा एक खर्राटी आवाज हो। यो रोग सजिलैसँग एन्डोस्कोपीले पत्ता लगायो (चित्र। 5।)। यो रोग पहिले पनि विभिन्न प्रकारका भाइरल संक्रमणको लागि जिम्मेवार थियो, तर अनुसार क्लार्क एट अल। (१ 1987 XNUMX)) यो एक बहु कारक रोग को रूपमा मान्नु पर्छ। यो रोग प्राय: अन्तरालभित्रै सीमित हुन्छ।
(उप) जीर्ण ब्रोन्काइटिस
कफ र नाक स्राव, ट्रेकिओ-ब्रोन्कियल रूखमा बढ्ने श्लेष्म उत्पादनको कारणले गर्दा हो, एक्वाइन मेडिसिनमा सामान्य समस्याहरू हुन्। यो याद गर्नुपर्दछ कि घोडामा सामान्यतया खान्सीको लागि उच्च सीमा हुन्छ र यसैले खोक्रा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी गडबडीको लागि सशक्त संकेत हो। वास्तवमा, क्लिनिकल चिन्हको रूपमा खोकीमा ट्रेकिओ-ब्रोन्कियल डिसअर्डर निदानको लागि %०% संवेदनशीलता हुन्छ। आज, एन्डोस्कोपी श्वासप्रश्वास रोगहरूको पहिचान गर्ने सामान्य विधि हो। यस उद्देश्यका लागि, meter मिटर लामो मानव कोलोनोस्कोपहरू नाकको परिच्छेदहरू र रीमा ग्लोटिस मार्फत टाँका भित्र घुसाइन्छ। दायरा अझ ठूलो ब्रोन्चीमा बढेको छ। एन्डोस्कोप नमूनाहरू मार्फत लिन सकिन्छ। सामान्यतया, एक ट्रेकिओ-ब्रोन्कियल एस्पीरेट वा एक ब्रोन्को-एल्भोलर लभ्याज (BAL) गरिन्छ। कहिलेकाँही साइटो ब्रश नमूना वा सानो बायोप्सीहरू संकलन गरिन्छ। नमूनाहरूको साइटोलोजिकल र ब्याक्टेरियोलोजिकल खोजहरूको सम्बन्धमा एन्डोस्कोपिक छविले प्रायः निदानको लागि अग्रसर गर्दछ। घोडामा फोक्सो फंक्शन टेस्टको प्रयोग केवल ती प्रविधिहरूमा सीमित छ जसलाई थोरै सहयोग चाहिन्छ। वायुप्रवाह प्यारामिटरको सम्बन्धमा सामान्यतया intrapleural दबाव मापन गरिएको छ (छवि 6।)।
घोडामा ब्रोन्काइटिसको दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र लगातार रूपहरू इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिसीज (आईएडी) र रिकरन्ट एयरवे अवरस्ट्रेशन (आरएओ) हुन्। दुबै अवस्थाहरूमा, साँसयुक्त धूलो कणहरू सम्म एयरवे hyperreactivity को एक चर डिग्री एक भूमिका खेल्छ (Ghio et al।, 2006)। RAO को मामलामा, ब्रोन्चियोलर रोगविज्ञानको छेउमा, ठूला वायुमार्ग र एल्भियोलीमा माध्यमिक परिवर्तनहरू विकास हुन्छन्।
इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिसीज (IAD)
IAD एक श्वासप्रश्वास सिंड्रोम हो, सामान्य रूपमा युवा प्रदर्शन घोडामा अवलोकन गरिन्छ (बुरेल १ 1985।; स्वीनी एट अल।, १ 1992 XNUMX २; बुरेल एट अल। १ 1996 XNUMX; चैपम्यान एट अल। २०००; काठ, एट अल। १ 1999 XNUMX।; क्रिष्टली एट अल। २००१; MacNamara एट al.1990; रशमूर एट अल। 1995), तर यो विशेष रूपमा कान्छो घोडाको रोग होईन। गर्बर एट अल। (२००aa)) देखाईयो कि धेरै एसिम्प्टोमेटिक राम्रो प्रदर्शन प्रदर्शन-जम्परहरू र ड्रेसेज घोडामा IAD का संकेतहरू छन्। यी घोडाहरू सामान्यतया -7-१-14 बर्ष हुन्छन्, जुन प्रभावित फ्ल्याट रेस घोडाहरूको उमेर भन्दा बढी छ जुन प्रायः २ देखि years वर्ष बीचको हुन्छ।
जे होस् IAD को एक सर्वव्यापी रूपमा स्वीकृत परिभाषा अवस्थित छैन, एक कार्य परिभाषा इक्वाइन क्रोनिक एयरवे रोग विषयक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला द्वारा प्रस्तावित गरिएको थियो। आईएडी युवा, एथलेटिक घोडाहरुमा एक गैर-सेप्टिक वायुमार्ग रोगको रूपमा परिभाषित छ जसको स्पष्ट परिभाषित एटियोलॉजी छैन (बेनामी, १ 2003 XNUMX२)। यो दृष्टिकोण ACVIM सहमति वक्तव्यमा पुन: पुष्टि भयो।कुउटिल, २००).
भरपर्दो र मानक बृद्धि घोडामा आइएडीको घटना ११..11.3 र %०% बीचमा अनुमान गरिएको छ (बुरेल १ 1985।; स्वीनी एट अल।, १ 1992 XNUMX २; बुरेल एट अल। १ 1996 XNUMX; चैपम्यान एट अल। २०००; वुड, एट अल।, १ 1999 XNUMX।; म्याकनामारा एट अल।, १ 1990 XNUMX ०; रश Moore et al।, 1995).
क्लिनिकल लक्षणहरू प्राय जसो सूक्ष्म हुन्छन्, कि तिनीहरूले ध्यान नयौं। त्यो अवस्थामा, निराशाजनक रेसि performance प्रदर्शन IAD को उपस्थितिको लागि मात्र संकेत हुन सक्छ। एन्डोस्कोपिक जाँच IAD निदानको लागि प्रमुख मद्दत हो। वायुमार्गमा श्लेष्म संचय सामान्यतया अवलोकन गरिन्छ। संकलित BAL तरल पदार्थ (BALF) नमूनाहरूको साइटोलोजीको परिणाम रोग निदानको लागि महत्वपूर्ण प्यारामिटर हो। BALF नमूनाहरूको cytospins मा विभिन्न भड़काउने कक्षहरू देख्न सकिन्छ (चित्र। 7।)। RAO को विपरित, ईओसिनोफिल ग्रानुलोसाइट्सको अलि बढि संख्या देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ सहमति छ कि क्लिनिकल लक्षणहरू (बेनामी, १ 2003 XNUMX२; कुउटिल, २००) airway सूजन र फोक्सो dysfunction समावेश गर्नु पर्छ। यद्यपि क्लिनिकल संकेतहरू बरु अस्पष्ट छन् र फोक्सोको कार्य परीक्षणले श्वसन प्रतिरोधमा केवल धेरै हल्का परिवर्तन देखाउँदछ। एन्डोस्कोपीमा घोडाहरूले श्वासनलिकामा स्रावहरू स may्कलन गरेको हुनसक्दछ कि खाँको प्रदर्शन नगरी नै। त्यसकारण, अन्य श्वासप्रश्वास सम्बन्धी विकारहरूको विपरित, खोकी दौड घोडामा IAD को एक असंवेदनशील सूचक हो। रेसहर्समा आईएडी समय एक प्रशिक्षण वातावरणमा हुनुको साथ घट्दै देखिन्छ (क्रिस्टली एट अल।, २००१).
श्वसन भाइरस संक्रमणले सिन्ड्रोममा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दैन जस्तो देखिन्छ (बेनामी, १ 2003 XNUMX२), तर IAD को विकासमा तिनीहरूको अप्रत्यक्ष भूमिकामा अझै सहमति हुन सकेको छैन। श्वासप्रश्वासको म्यूकोसाको ब्याक्टेरिया उपनिवेश नियमित रूपमा फेला पर्‍यो (काठ र एल्।, 2005)। यो म्युकोसिलरी खाली भएमा कमीसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। यसको अवधिमा कम म्यूकोसल क्लीयरेंस धूल वा अमोनिया जस्ता विषालु ग्याँसबाट ज्ञात क्षतिको परिणाम हुन सक्छ। साधारण पृथकहरू समावेश छन् स्ट्रेप्टोकोकस चिडियाखाना, एस निमोनिया, Pasteurellaysae का सदस्यहरू (सहित) एक्टिनोबासिलस spp), र बोर्डलाला ब्रोन्किसेप्टिका। केही अध्ययनहरूले विशेष गरी माईकोप्लाज्माको संक्रमणको लागि भूमिका प्रदर्शन गरेका छन् एम। फेलिस र एम। इक्विरहिनिस (काठ र एल्।, 1997; होफमन एट अल।, 1992).
यद्यपि यो अनुमान गरिएको छ कि AD 35% देखि% 58% IAD का केसहरु संक्रमणको कारणले हुँदैन। राम्रो धुलो कणहरू यी घटनाहरूको ट्रिगर मानिन्छ (Ghio एट अल २००।)। एक पटक IAD स्थापित भएपछि, परम्परागत अस्तबलमा दीर्घकालीन रहनुले IAD लक्षणहरू बिग्रेको जस्तो देखिदैन (Gerber ET अल।, 2003a). क्रिष्टली एट अल। (२००१) रिपोर्ट गर्‍यो कि तीव्र व्यायाम, जस्तै रेसि .ले कम वायुमार्गको जलनको जोखिम बढाउन सक्छ। ट्र्याक सतहबाट वा फ्लोटिंग संक्रामक एजेन्टको धुलो कणहरूको इनहेलेसन कडा व्यायामको क्रममा तल्लो श्वासप्रश्वासको गहिराइ भित्र पस्न सक्छ र फेरी पेरिफेरल लिम्फोसाइट प्रकार्यको साथ पल्मोनरी म्याक्रोफेज प्रकार्य बिगार्न सक्छ (मूर, 1996)। सिद्धान्तमा, चिसो मौसममा तीव्र व्यायामले बिना शर्त हवाले तल्लो वायुमार्गमा पहुँच प्राप्त गर्न र वायुमार्गमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ (डेभिस र फोस्टर, २००२), तर स्क्यान्डिनेभियामा अध्ययनहरूले स्पष्ट नतिजा देखायो।
धेरै लेखकहरू (स्वीनी एट अल।, १ 1992 XNUMX २; हफम्यान, 1995; क्रिस्टली एट अल।, २००१; होल्कम्बे एट अल, २००१) खलिहान वा स्थिर वातावरणलाई जवान घोडामा श्वासप्रश्वास रोगको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण जोखिम कारक विचार गर्नुहोस्। चाखलाग्दो कुरा, अस्ट्रेलियामा एक अध्ययन द्वारा क्रिष्टली एट अल। (२००१) रिपोर्ट गरे कि IAD को विकासको जोखिम कम भयो घोडाको लम्बाईसँग तालिममा थियो र यसैले स्थिर भयो। यस खोजीको लागि व्याख्या भनेको हवाईजनित इरिटन्ट्स प्रति सहिष्णुताको विकास हो, एक घटना जुन उच्च अनाज धुलोको स्तरको वातावरणमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूमा प्रदर्शन गरिएको छ।Schwartz et al।, 1994)। घोडाको IAD आंशिक रूपमा मानव जैविक धूलो विषैले सिन्ड्रोम (ODTS) को क्लिनिकल तस्वीर भित्र फिट हुन्छ। यस विचारका लागि केही प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिएको थियो भ्यान डेन होभेन एट अल। (२०० 2004)) एट अल।, जसले नेबुलीसीसनको कारण वायुमार्गको सूजन देखाउँदछ साल्मोनेला endotoxin।
आवर्ती एयरवे अवरोध
बारम्बार एयरवे अवरोध (RAO) घोडामा हुने साधारण रोग हो। विगतमा यो सीओपीडी भनेर चिनिन्थ्यो, तर पाथोफिजियोलजिकल मेकानिजमेन्टहरू मानव दमसँग बढी मानव सीओपीडी भन्दा बढी मिल्दोजुल्दो छ, यस रोगलाई २००१ देखि आरएओ भनिन्छ (रोबिन्सन, 2001)। यो रोग जहिले पनि क्लिनिक रूपमा हुँदैन, तर वातावरणीय चुनौती पछि, घोडाहरूले मध्यमबाट गम्भीर एक्स्प्रेरी डिस्प्नोआ देखाए, नाकमा डिस्चार्ज र खोक्रा पछि (रोबिन्सन, 2001)। रोगको खतरा वातावरणीय एलर्जीनहरूको श्वासले गर्दा हुन्छ, विशेष गरी घाँटीको धुलो, जसले गम्भीर ब्रोन्कोस्पाज्म निम्त्याउँछ र थप hypersecretion पनि। श्लेष्म स्राव स while्कलन गर्दा श्लेष्म स्राव बढ्छ र यसले वायुमार्ग संकुचनमा योगदान पुर्‍याउँछ (रोबिन्सन, 2001)। माफीको क्रममा, क्लिनिकल लक्षणहरू पूर्ण रूपमा कम हुन सक्छ, तर वायुमार्गको एक अवशिष्ट सूजन र नेबुलाइज्ड हिस्टामाइनको ब्रोन्सीको एक उच्च रक्तस्राव अझै बाँकी छ। एल्भोलर एम्फाइसेमाको कम डिग्री पनि विकसित हुन सक्छ, हवाको जालको बारम्बार एपिसोडहरूको कारणले। विगतमा, गम्भीर अन्त-चरण एम्फाइसेमा प्रायः निदान गरिएको थियो, तर आज यो अनौठो हो र धेरै वर्षको रोग पछि पुरानो घोडाहरूमा मात्र छिटपुट रूपमा देखा पर्दछ। सामान्यतया स्वीकृत एलर्जर्न्स जसले RAO को एक उत्तेजना पैदा गर्दछ वा उत्तेजित गर्दछ विशेष गरी spores हो Aspergillus fumigatus र Fusarium एसपीपी
यद्यपि आरएओले मानवीय दमको साथ धेरै समानताहरू साझा गर्दछ, BALF मा eosinophils को संचयको बखत कहिले रिपोर्ट गरिएको छैन। मानवमा दमको आक्रमण ब्रोन्कोकन्टस्ट्रिकेशनको शुरुवाती चरणको प्रतिक्रियाले देखाउँदछ, साँसको एलर्जेनको जोखिमको केही मिनेट भित्रमा। यो चरण पछि वायुमार्ग अवरोधको निरन्तरता र एयरवे सूजनको विकासको साथ दम दमको प्रतिक्रिया पछि हुन्छ। यो प्रारम्भिक दम प्रतिक्रियामा मस्टसेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ (डी 'अमाटो एट अल।, २००।; भ्यान डर क्लीज एट अल।, २००।)। एल्स्टर्जेन इन्हेलिंग गरेपछि मस्तकोषहरूको सक्रियताले हिस्टमाइन, ट्रिपटेस, साइमाइज, सिस्टिनेल-ल्युकोट्रिन, र प्रोस्टाग्लैन्डिन डी २ सहित मस्टसेल मध्यस्थहरूको रिलीजमा परिणाम दिन्छ। यी मध्यस्थहरूले एयरवेलाई सहज मांसपेशीहरूको संकुचन गराउँदछन्, क्लिनिक रूपमा प्रारम्भिक-चरण दमको प्रतिक्रियाको रूपमा संदर्भित। मास्टसेलले प्रोइनफ्लेमेटरी साइटोकिन्स पनि जारी गर्दछ जुन अन्य मस्टसेल मध्यस्थहरूको साथमा न्युट्रोफिल र इओसिनोफिल ग्रानुलोसाइट्सको बहाव र ब्रोन्कोकन्स्ट्रिक्शनलाई उत्प्रेरित गर्ने सम्भावना हुन्छ जुन ढिलो चरण दमको प्रतिक्रियामा समावेश छ। अन्य प्रकारको मस्टेल रिसेप्टर्सको सक्रियताले मस्टसेल डिग्रेनुलेसनलाई पनि बढावा दिन सक्छ वा एफसी-आरआई मध्यस्थता गरिएको मस्टसेल सक्रियणलाई विस्तार गर्न सक्दछ (Deaton एट अल, २०० 2007).
घाइते RAO मा पीडित, यस्तो प्रारम्भिक चरण प्रतिक्रिया देखा पर्दैन जस्तो देखिन्छ, जबकि स्वस्थ घोडामा प्रारम्भिक चरण प्रतिक्रिया देखा पर्दछ (Deaton एट अल, २०० 2007)। यो प्रारम्भिक चरण प्रतिक्रिया परिधीय वायुमार्गमा पुगेको जैविक धूलोको खुराक घटाउन एक सुरक्षा संयन्त्र हुन सक्छ (Deaton एट अल, २०० 2007)। स्पष्ट रूपमा RAO भएको घोडामा, यो सुरक्षात्मक संयन्त्र हराएको छ र ढिलो चरण प्रतिक्रिया मात्र विकसित हुनेछ। धूलोको जोखिमको समयले निर्धारात्मक भूमिका खेल्छ, जस्तो कि घाँस र पराल to घण्टासम्म जोखिमसहितको अध्ययनले देखाउँदछ। यस चुनौतीले RAO-प्रभावित घोडाको BALF मा हिस्टामाइन एकाग्रता को बृद्धि गरेको छ, तर नियन्त्रण घोडामा होइन। यसको विपरित, घाँस र परालमा केवल minutes० मिनेटको एक्स्पोजरले RAO घोडाको BALF हिस्टामाइन एकाग्रतामा उल्लेखनीय बृद्धि हुन सकेन (म्याकगोरम एट अल।, १ 1993 XNUMXbबी)। म्याकफेरसन एट अल।, १ 1979। Of को अध्ययनले संकेत गरे कि संकेतहरू उक्साउन कम्तिमा १ घण्टाको घाँटीको धुलोमा पर्नु पर्दछ। पनि Giguère एट अल। (२००२)) र अन्य (स्माललेनबाच एट अल।, १ 1998 XNUMX।) प्रमाण प्रदान गरियो कि जैविक धूलोको जोखिम अवधि १ घण्टा भन्दा लामो हुनुपर्दछ। उनीहरूको राय हो कि आरएओ प्रभावित घोडामा हवाई मार्ग अवरोधको क्लिनिकल संकेतहरू उक्साउन आवश्यक एक्सपोजर घण्टा देखि दिन फरक पर्दछ।
RAO मा IgE- मध्यस्थता घटनाहरूको भूमिका अझै पज्जल छ। आरएओ घोडामा फgal्गाल बीजाणुहरूको बिरूद्ध सीरम आईजीई स्तरहरू स्वस्थ घोडाको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च थिए, तर BALF मा आईजीई रिसेप्टर-बेयरिंग सेलको गणनाहरू स्वस्थ र आरओ प्रभावित घोडाहरूको बिचमा खास फरक थिएन।कुन्जल एट अल, २०० 2007). Lavoie एट अल। (२००१) र किम एट अल। (२०० 2003)) क्लिनिकल संकेतहरूको लागि जिम्मेवार टाइप २ को टी-सहायक सेल प्रतिक्रिया आयोजित गर्‍यो, मानव एलर्जीको दम जस्तै। जहाँसम्म, उनीहरूका नतिजाहरू अन्य अनुसन्धान समूहहरूको परिणामसँग विरोधाभासमा छन् जसले एक लि group्गको समूहको तुलनामा RAO को बढ्दो अवस्थाको साथ लिम्फोसाइट साइटोकाइन अभिव्यक्ति ढाँचामा भिन्नता फेला पार्न सकेन।क्लेबर एट अल। २०० 2005).
यदि कम्तिमा २ मापदण्ड पूरा भयो भने RAO को निदान गरिन्छ: एक्स्प्रेरी डिस्प्नोआ अधिकतम इंट्रा फ्यूरल प्रेशर भिन्नता (PpPlmax)> १० मिमी एचको परिणाम दिन्छ2O उत्तेजित हुनु अघि वा> १ mm मिमी H2O धूलोको साथ वा खराब आवास अवस्थाहरू द्वारा उत्तेजना पछि। BALF मा> १०% को कुनै विभेदक ग्रानुलोसाइट काउन्ट RAO का लागि संकेत हो। यदि लक्षणहरू ब्रोन्कोडाइलेटर उपचारको साथ सम्बोधित गर्न सकिन्छ भने, निदान पूर्ण रूपमा स्थापित हुन्छ (रोबिन्सन, 2001)। केहि गम्भिर मामिलाहरूमा धमनी पाओ2 mm२ एमएमएचजी भन्दा कम हुन सक्छ। घाँसेको धुलोले उक्साए पछि, RAO बिरामीहरूले समान रूपमा कम धमनी अक्सिजनको स्तरसम्म पुग्न सक्छ। जनावरहरूलाई २ past घण्टा चराहरूको लागि राख्नुले क्लिनिकल लक्षणहरूलाई सबक्लिनिकल स्तरमा चाँडै कम गर्दछ।
दृश्य रूपात्मक परिवर्तनहरू मुख्य रूपले साना वायुमार्गमा अवस्थित हुन्छन् र अल्भियोली र प्रमुख वायु मार्गहरूमा प्रतिक्रियाशील रूपमा फैलिन्छन् (काउप एट अल।, १ 1990 XNUMX ० ए, b) घाव केन्द्रित हुन सक्छ, तर कार्यात्मक परिवर्तनहरूले ब्रोन्कियल रूखमा राम्रोसँग देखा पर्दछ। ब्रोन्कियल लुमिनाले एक्स्युडेटको एक चर मात्रा समावेश गर्न सक्दछ र मलबेको साथ प्लग हुन सक्छ। एपिथेलियम इन्फ्लेमेटरी कोषहरू, मुख्यत: न्युट्रोफिल ग्रानुलोसाइट्सको साथ घुसिएको छ। यसबाहेक, उपकला डेक्वामेसन, नेक्रोसिस, हाइपरप्लासिया र गैर प्यूरिन्ट पेरीब्रोन्कियल घुसपैठाहरू देख्न सकिन्छ। छिमेकी एल्भोलर सेप्टामा फैलिएर फिब्रोसिंग पेरिब्रोन्काइटिस गम्भीर बिरामी जनावरहरूमा रिपोर्ट गरिएको थियो (काउप एट अल, १ 1990 XNUMX ० ब)। ब्रोन्चियोल्समा यी परिवर्तनहरूको हद फेफडेको समारोहमा कमीसँग सम्बन्धित छ, तर परिवर्तन प्रकृतिमा स्पष्ट रूपमा केन्द्रित हुन सक्छ (काउप एट अल।, १ 1990 XNUMX ० ब)। विशेष गरी क्लारा सेलहरूको कार्य ब्रोन्चियोल्सको अखण्डताका लागि महत्त्वपूर्ण छ। हल्का बिरामी जनावरहरूले ब्रोन्चियोल्समा भडकाउने परिवर्तनहरू हुनु अघि नै गोब्लेट सेल मेटाप्लासियाको छेउमा क्लारा सेल ग्रान्युलहरूको ह्रास देखाउँदछ। यो सँगै मिलेर अल्ट्रास्ट्रक्चरल परिवर्तनहरू द्वारा Kaup et al। (१ 1990 XNUMX ० बि) धुलो र LPS को हानिकारक प्रभाव को विचार समर्थन गर्दछ। गम्भीर रूपमा प्रभावित घोडामा क्लारा कोषहरू अत्यधिक खाली पनी कक्षहरू द्वारा प्रतिस्थापन गरिन्छ। प्रतिक्रियाशील घावहरू एल्भोलर स्तरहरूमा देख्न सकिन्छ। यसमा टाइप I pneumocytes, alveolar fibrosis र प्रकार II न्युमोसाइट रूपान्तरणको चर डिग्रीको नेक्रोसिस समावेश छ। यसबाहेक, कोहन्सपोरेसको बृद्धि भएको एल्भोलर एम्फाइसेमा हुन सक्छ। यी संरचनात्मक परिवर्तनहरूले गम्भीर RAO भएको घोडामा फोक्सोको अनुपालन गुमाउन सक्छ।
त्यहाँ RAO र IAD का बीचमा कुनै कारण सम्बन्ध छ कि छैन अझै स्थापित भएको छ (रोबिन्सन २००१; बेनामी २००)। दुबै विकारहरूमा, तथापि, अस्तबलको एक खराब मौसमले खेल्दछ। यो सैद्धांतिकीकरण हुन सक्छ कि आईएडी ले अन्ततः RAO मा परिणाम दिन सक्छ, तर गर्बर एट अल। (२००aa)) सुझाव दिनुहोस् कि IAD र RAO बीच कुनै सीधा सम्बन्ध छैन। आरएओमा हिस्टमाइन नेबुलाइजेशन वा एयर एलर्जेन्सद्वारा प्रेरित hyperreactivity आईएडी भन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ, केवल हल्का ब्रोन्कियल hyperreactivity मात्र देखाउन सकिन्छ।
लामो समयदेखि, घोडा परिवारको पुस्ताका सदस्यहरूमा गरिएको निरीक्षणको आधारमा, यो विश्वास गरियो कि RAO का वंशानुगत घटक छ। भर्खरै रम्सेयर एट अल। (२०० 2007)) घोडाको दुई समूहमा पत्ता लगाएको आधारमा RAO लाई विरासतमा प्राप्त प्रकोपको धेरै कडा प्रमाण प्रदान गर्दछ। उही अनुसन्धान समूहले प्रदर्शन गर्न सक्दछ कि मसिन जीनहरूले पनि भूमिका खेल्न सक्छन् (Gerber ET अल।, 2003b) र त्यो क्रोमोजोम १ on मा स्थित IL4RA जीन RAO प्रत्याशाको लागि उम्मेद्वार हो (जोस्ट एट अल, २०० 2007)। अहिलेसम्म भेला भएका नतिजाहरुले सुझाव दिन्छ कि RAO बहुवचन रोग जस्तो देखिन्छ। दुई स्टेलियन परिवारहरूको पल्मोनरी स्वास्थ्य स्थितिको वंशानुगत पक्षहरूको लागि विभाजन विश्लेषण प्रयोग गरेर, Gerber at al। (२००।)) देखायो कि प्रमुख जीनले RAO मा भूमिका खेल्छ। एउटा परिवारमा पैतृक सम्पत्तिको मोड अटोसोमल प्रबल थियो, जबकि अन्य घोडा परिवारमा आरएओ एक औटोसोमल रिसेसिभ मोडमा विरासतमा देखिन्छ।
पल्मोनरी सिलिकोसिस सिलिकन डाइअक्साइड (SiO) को इनहेलेसनबाट परिणामहरू2) particulates। यो घोडा मा असाधारण छ। केवल क्यालिफोर्नियामा एक केस श्रृंखला प्रकाशित भएको छ। प्रभावित घोडाले लामो वजन घटाउने, व्यायाम असहिष्णुता, र डिसप्नोआ देखायो (बेरी एट अल।, १ 1991 XNUMX १).
यो प्रश्न गर्न सकिन्छ कि हाम्रो घरपालुवा जनावरहरू, विशेष गरी कुकुर, बिराला र घोडालाई वायु प्रदूषणको शिकारको रूपमा वा "सेन्टिनेल्स" को रूपमा लिनु पर्छ। तिनीहरू वास्तवमा मानव क्रियाकलापको शिकार भएका हुन्छन्, आफैले आफैंले। अर्कोतर्फ, कुकुर, घोडा र बिरालाको नस्ल, जुन हामी तिनीहरूलाई आज जान्दछौं, सबै पाल्तुपालनको प्रक्रियाको क्रममा र पछि मानिसद्वारा जन्मेका थिए। यदि घोडा (इक्वास क्याबल्ली) मान्छे द्वारा पालेको थिएन, यो धेरै पहिले विलुप्त भएको थियो। यस मद्दतको काउन्टर ट्रेड भनेको यो हो कि घोडाले आफुले आफुले प्रदान गरेको बानीमा आफूलाई अनुकूल बनाउनु पर्छ। फिड, आश्रय, पशु चिकित्सा देखभाल, तर स्वास्थ्य दुरुपयोग कारकहरूको दुरुपयोग र जोखिम पनि। तसर्थ, अन्य साथी जनावरहरू र उत्पादन जनावरहरू जस्ता घोडा मान्छे को रूप मा उस्तै वातावरणीय कारकहरुमा पर्दाफास भयो र यसैले "वातावरणीय जोखिमको लागि प्रहरीहरू" को रूपमा काम गर्न सक्दछ। तिनीहरूको छोटो जीवन अवधिको कारण, कुकुर र बिरालाहरूले स्वास्थ्यको समस्या जीवनमा प्रतिकूल वातावरण वा व्यक्तिको भन्दा पहिलेको क्षणमा पोस्टमार्टममा व्यक्त गर्न सक्दछन्। घोडाले धुलो इनहेलेसनको पुरानो प्रभाव प्रदर्शन गर्न सक्छ जुन तुलनात्मक औषधिमा उपयोगी अवलोकनहरू हुन्। लेखकहरूको रायमा, पशु चिकित्सा र मानव चिकित्सा महामारीविज्ञानीय डेटाको संयोजन मानिस र यसको पशु साथीहरूका लागि वातावरणीय जोखिम कारकहरू पहिचान गर्न एक धेरै शक्तिशाली उपकरण हो।
रेने भ्यान डेन होभेन द्वारा
पेश गरिएको: अक्टुबर २२ २०१०समीक्षा गरिएको: मे २०११प्रकाशित: सेप्टेम्बर6२०११
DOI: 10.5772 / 17753